IINDIDI ZESINKI ZEKHITSHI (ISIKHOKELO SOKUGQIBELA) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Iindidi zesinki zekhitshi (Isikhokelo sokugqibela)
Iindidi zesinki zekhitshi (Isikhokelo sokugqibela)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu esinezona ndidi zaziwayo zekhitshi zokukunceda ukhethe eyona ilungileyo ekhayeni lakho.
Isinki yekhitshi inokubonakala ngathi yinkcaza encinci kuyilo lwakho lwekhitshi, kodwa enyanisweni yenye yezona ndawo zixineneyo ekhitshini. Kulapho uhlamba khona imihla ngemihla, ulungisa ukutya, uhlambe izitya, kwaye kwabanye ude ude ube bhetyebhetye njengendawo yokuhlamba izilwanyana zasekhaya okanye iintsana. isetyenziswe imihla ngemihla, ngamaxesha amaninzi.
Ngemisebenzi yayo emininzi, kubalulekile ukuba ukhethe isinki enokwenzela abasebenzisi iimfuno zayo ekugqibeleni kwaye iqhubeke nokuhamba kwendlu, ngelixa ikwazi ukumelana nokuwohloka kunye nokusetyenziswa kwemihla ngemihla. Ukongeza koku, isinki yakho yasekhitshini ikwafuna ukugcwalisa isimbo esixhaphakileyo sekhaya lakho ukongeza kwisibheno sayo somdla kunye nomdla.
Apha ngezantsi, sikunika esethu esona sikhokelo sokugqibela kwiindidi ezahlukeneyo zamasinki ekhitshi kunye nezona zilungileyo ezinokukunceda wandise amandla ekhaya lakho. Sijoyine njengoko sijonga kulungelelwaniso lwesinki eyahlukeneyo, izitayile, iintlobo, ubungakanani kunye nezinto ezikhoyo kwimarike, kunye nezinye zeempawu zazo ezilungileyo nezingalunganga.
Iindidi ezidumileyo zesinki zekhitshi
Ukunciphisa iitshini zekhitshi
Isinki yekhitshi yokuntywila
Isinki ephindwe kabini yekhitshi
I-Basin ephindwe kabini enesahluli esisezantsi
Indawo yasefama yokuKhika
Isitya esisodwa seKhitshi lokuntywila
Intaba ephezulu ekhitshini isinki
Isinki yeKhitshi edibeneyo
Isiqithi, ibha okanye isinki yokulungiselela
Ifaskoti Kitchen Sinks
Ukuntywila kweKhitshi eliMnyama
Sinks ezincinci zekhitshi
Ukuntywila kweKhitshi enzulu
Ukuntywila okuSimahla kweKhitshi
Isinki yanamhlanje yeKhitshi
Ilizwe lekhitshi lokuntywila
Ukuntywila kweKhitshi yeVintage
Iindidi zezixhobo zekhitshi lokuntywila
Stainless Sinks Sink
I-Porcelain Kitchen Sinks
Ikhitshi leCopper Shinks
Intsimbi Yekhitshi Yesinki
Indawo yokucoca umlilo eKhitshini
ICeramic Kitchen Sinks
I-Quartz edibeneyo yeKhitshi
Umphezulu oqinileyo weSinki yeSinki
Acrylic Ekhitshini Sinks
Ikhonkrithi yokuKhangela kweKhitshi
Ilitye lendalo leKhitshi liyazika
Izinto eziLungileyo zokuSinki kweKhitshi
Ubungakanani bokuSinki kweKhitshi
Ubungakanani obuSinki obuqhelekileyo beKhitshi
Iifinki zekhitshi lokuntywila
Iindidi zeefaucet zasekhitshini
Ukufakwa kwesinki yekhitshi
Izinto ezintathu ezisetyenziselwa ukwahlula isinki ekhitshini
Izinki zitshintshe kakhulu kule minyaka idlulileyo ukuze zilungelelane nekhitshi lokuzivelela rhoqo njengeziko eliphambili lekhaya lomsebenzi. Kananjalo, uluhlu olwahlukileyo lokhetho lokuntywila ekhitshini ngoku luyafumaneka kwimarike ukuze lulungele naluphi na uhlobo lwesidingo kunye naluphi na uhlobo lokusetwa kwekhitshi.
Ngokubanzi, iisinki zekhitshi zinokuhlelwa ngokomahluko osisiseko abathathu, oko kukuthi ukucwangciswa kwesinki okanye ubungakanani, uhlobo lofakelo kunye nezinto eziphathekayo.
Ukucwina kwesinki okanye ubungakanani -Ukuqwalaselwa kwesinki kubhekisa nje kwinani lezitya okanye izitya esele zinazo, nangona kunjalo, inokubandakanya iinkcukacha ezisesekondari njengenani lemingxunya yompompo okanye uhlobo lweekona, nokuba ijikelezwe okanye isikwere. (Funda ngakumbi malunga iintlobo zeefompo zasekhitshini Apha.) Imizekelo yoqwalaselo lwesinki yekhitshi lubandakanya izitya ezizodwa, izitya eziphindwe kabini okanye izitya ezithathu.
Ukuqwalaselwa kwesinki yinto ebalulekileyo kuba inxulumene ngqo nokusebenza kwesinki kunye nokusebenza kwayo. Ngokwesiqhelo, ukukhetha ubumbeko kunye nobungakanani besinki yakho yekhitshi kuya kuxhomekeka kwizinto ezinje ngobungakanani bendawo yakho yokubala, ubungakanani beekhabhathi ezisisiseko kunye nokusetyenziswa okuphakathi okanye ukuhamba komsebenzi ekhitshini lakho.
Uhlobo lofakelo - Uhlobo lofakelo lwesinki yekhitshi lubhekisa kwindlela emiswe ngayo kwi-countertop. Eminye imizekelo ethandwayo yeyokuphakama okuphezulu okanye ukuhla kweesinki, phantsi kweesinki zentaba, iisinki ezihlanganisiweyo kunye neesinki zekona.
Izinto eziphathekayo - Izinto ezinxulumene noku kwinto esinki yekhitshi eyenziwe ngayo. Kukho uluhlu olubanzi lwezixhobo ezikhoyo kwimarike kwaye kubandakanya isinyithi, iiseramikhi, i-porcelain, i-fireclay, i-granite edityanisiweyo, umphezulu oqinileyo, njl.
Ngaphantsi kokuntywila kumgxobhozo, njengoko igama lawo libonisa, zizinki ezibekwe ezantsi kwetheyibhile. Olu hlobo lokumiliselwa kwesinki luyaphikisana nendlela yokufaka yemveli apho isinki ifakelwe ukusuka phezulu ezantsi kunye nemilebe yayo ephumle emaphethelweni e-countertop esikiweyo. Ngaphantsi kweesinki zentaba, akukho mlomo okanye irim.
Uninzi olungaphantsi kweesinki zentaba lwakhiwe ngentsimbi engenasici kwaye zisebenza kakuhle ngee-countertops zamatye zendalo ezinjengeemabhile kunye negranite. Kukho ubhedu phantsi kweesinki zentaba ezikhoyo kwimarike kwaye ziyafumaneka kwisitya esinye, isitya esiphindwe kabini kunye nesitya esiphindwe kathathu.
Enye yeenkxalabo eziphambili ekufakweni phantsi kweesinki zentaba yinto enokwenzeka yokuvuza, kodwa enyanisweni le ayisiyongxaki kangako. I-epoxy yamandla aphezulu, i-silicone caulk kunye nee-anchor zentsimbi zongezwa emazantsi e-countertop material zinceda ukubonelela ngokudibeneyo kwisitya ngelixa kuqinisekiswa ukuba ikhuselekile endaweni. Ngofakelo olufanelekileyo, phantsi kweesinki zentaba kunokuhlala ixesha lokuphila ngelixa uvuza simahla.
Iinkonzo eziphantsi kweentaba zokuntywila Ngaphantsi kweesinki zentaba zihlala zisetyenziselwa ukunika iikhitshi kunye neetafile ukugqibezela ngokungagungqi kunye nokubukeka okuthe tye, kubenze babe lukhetho olufanelekileyo kuseto lwangoku nolwanamhlanje.
Ukongeza ekunikezeleni ngobuhle obucocekileyo, oku kukwanomsebenzi osebenzayo. Ukucoca kunye nokugcina kulula ngokulula kuba naluphi na uhlobo lwenkunkuma yokutya inokutshayelwa iqonde isinki ngokusebenzisa isiponji okanye ilaphu elilula.
Ngokungafaniyo nesinki yentaba ephezulu, isinki engaphantsi kwentaba ayinayo nayiphi na indawo apho ukutya kungangena khona okanye kuqokeleleke. Ngaphandle kwalonto, akukho milomo ingena kwindlela yokulungiselela kwakho ekhitshini. Okokugqibela, phantsi kwesinki yentaba kunokubamba isixa esikhulu samanzi.
Umxhasi phantsi kweentaba zentaba : Nangona kunjalo, kusekho iziphene ezimbalwa kolu hlobo lwesinki. Elona cala liphambili lixabiso lalo, njengoko ngaphantsi kweesinki zentaba zihlala zibiza kakhulu kunezinye iindidi zekhitshi.
Bafuna umsebenzi omninzi ngokubhekisele kufakelo kuba isinki ifuna ukuncanyathiselwa ezantsi kwicala elingaphantsi lekhawuntara yekhitshi.
Ukukhanya okungaphantsi kweesinks zentaba ezinje ngezo zenziwe ngentsimbi engenasici zinokufakwa ngeglue nje kodwa ezo zinzima, njengeesinki zentsimbi okanye iisinki zomlilo ziya kufuna inkxaso yangaphakathi eyongeziweyo.
Isinki yekhitshi esekoneni lolunye lweentlobo ezithandwayo zokuntywila ekhitshini. Iqulethwe ngebhafu enye ebekwe kwikona apho iiphelo ze-countertop zidibana khona. Isinki zekitshi ezinamacala amabini, kwelinye icala, zidityaniswe ngezitya zokucoca eziphindwe kabini ezibekwe kwikona efanelekileyo omnye komnye ukusebenzisa ikona yendawo yokulwa.
Izikona zekona zisebenza kakuhle kulwakhiwo lwekhitshi olungacwangciswanga, okanye ezo zinendawo ezincinci. Ngokwesiqhelo ziza nezakhelwe kwindawo yokomisa, enceda ngokufikeleleka kunye nokusebenza kokuhamba komsebenzi.
Iingenelo zekitshi leekinki lokutshona : Iisinki zekhitshi lembombo azinakho ukubonelela ngezibonelelo ezifanayo eziza nesinki emiselweyo, kodwa ziza nezinto ezininzi ezinqwenelekayo.
Kubaqalayo, bongeza umdla obonakalayo kwisithuba. Njengoko sele kukhankanyiwe, iisinki zekitshi zekona aziqhelekanga, ke yinto entsha emehlweni, iyenza ukuba ibe sisongezo esahlukileyo ekhitshini. Kwaye ekubeni ibukeka inomdla, inokujikwa ibe yinto ekhunjulwayo ekhitshini ngokusebenza njengendawo ekugxilwe kuyo kwisithuba.
Ukongeza kwi-aesthetics, iisinki zekhitshi lembombo zikwajongwa njengendawo yokugcina indawo. Ngobuqili basebenzise imimandla yeetheyibhile enengxaki, iikona ezifileyo kunye neendawo ezingakhathalelwanga, emva koko baziphendulela kwinxalenye esebenzayo yekhitshi.
Ngendlela efanayo, bayayikhulula indawo yokubala, benze indawo yomsebenzi ongaphezulu wokulungiselela kunye nekhawuntari ende. Oku kubenza babe lukhetho olufanelekileyo kwiikhitshi ezincinci ezifumaneka kumagumbi okulala, iiyunithi zekhondomu, iipads okanye izitudiyo.
Ukuba unekhitshi elikhudlwana, isinki yekona inokusetyenziswa njengesinki eyongezelelweyo yokulungiselela ukutya kunye nokucoca, ngokufanelekileyo ukuphucula ukuhamba komsebenzi ekhitshini lakho. Izikona zekona zikwanikezela ngokuguquguquka ngakumbi njengoko zinokubekwa naphina kwikhawuntara yasekhitshini, ukuba nje kusekoneni.
Bendlela ukutshona ikona Ngelixa ukubekwa kweesinki zekona kubonelela ngendlela efanelekileyo nesebenzayo yokusebenzisa ubume bekhitshi, kusekho inani lezinto ezinokubakho kule ngxaki.
Ukubeka isinki kwikona yekhitshi kuthetha ukuba ngumntu omnye kuphela onokuyisebenzisa ixesha. Nangona kunjalo, usenokuhlala abasebenzisi abaninzi ukuba uhamba nesinki ephindwe kabini yekona.
Iikona zekhitshi nazo zinokubonelela ngezibane ezinqongopheleyo kwaye ngamanye amaxesha kunokuba nzima ukuzisebenzisa ngenxa yokungabikho kokhanyiso. Isisombululo esilula ukujongana nalo mbandela kukusebenzisa phantsi kwesibane sekhabhathi kunye nokukhanyiswa kwemisebenzi.
Ukucoca nako kunokuba ngumceli mngeni, kuba ngamanye amaxesha kunzima ukufikelela kuzo. Kwakhona, indawo engaphantsi kwesinki yekhitshi ekhoneni inokungabinamsebenzi, ngaphandle kokuba kukho indawo eyaneleyo yokugcina apho.
You unokukhetha iibhasikiti zocingo ezifanelekileyo ezilunge ngokugqibeleleyo kwiikona ukuze ube nakho ukuzisebenzisa ukugcina izinto zasekhitshini. Okokugqibela, iisinki zekhitshi lembombo kunzima ukuzifumana kwimarike kwaye zibiza kakhulu kunezinye iintlobo zomgangatho wokuntywila. Ezi sinki zifuna ukuphuma kwesiko ekhitshini.
Isinki ephindwe kabini yesinki okanye isitya sesinki esiphindwe kabini lolona hlobo luthandwayo lokumiswa kwesinki yekhitshi. Ikwabizwa ngokuba sisitya esiphindwe kabini, olu hlobo lwesinki lubonisa izitya ezimbini, ezivumela ukuhlanjwa kwelinye icala kunye nokucoca ukomisa kwelinye icala.
Izitya zokubhaka eziphindwe kabini ziza kuluhlu olubanzi loqwalaselo kunye nobukhulu, ukusuka kwiibhotile ezimbini ezinobungakanani obulinganayo, ubunzulu kunye nemilo, izitya ezimbini ezingalinganiyo, izitya ezibini ezilinganayo ezinobunzulu obahlukeneyo ukuya kwigumbi elikhulu elinamacandelo amancinci.
Ngenxa yenani elibanzi lokukhetha, izitya eziphindwe kabini zokubonelela zibonelela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka ngokusetyenziswa. Ungasebenzisa elinye icala lesinki ukuhlamba kunye nelinye ukulungiselela umsebenzi, ungabeka isepha kwizitya kwelinye icala emva koko uyihlambe okanye uyomise kwelinye okanye ungasebenzisa isitya esincinci sokulahla inkunkuma kwaye ugcine omkhulu enye yokucoca.
Indlela oyisebenzisa ngayo iya kuthi ekugqibeleni ixhomekeke kwiimfuno zakho kunye nokuseta okufanelekileyo kuya kusekelwa kakhulu kwimisebenzi kunye nokuhamba komsebenzi ekhitshini lakho.
Iinkqubo zokuntywila kabini kwesitya Isibonelelo esisisiseko esibonelelwa sisinki yesinki ephindaphindayo kunye nokuguquguquka.
Njengoko sele kukhankanyiwe, izitya zesitya esiphindwe kabini zibonelela ngeendlela ezininzi kunye neendlela zokusebenzisa isinki kwaye ngokuyintloko, kunokubizwa ngokuba kukuntywila okunenjongo.
Unako kwakhona ukukhulula indawo yokubaleka usebenzisa isitya esiphindwe kabini, ngelixa ugcina indawo yakho yokulungiselela kunye nokucoca indawo ehlelwe kakuhle.
Bendlela izitya kabini izitya Elinye icala elisezantsi lesitya esityikityiweyo sesibini sesokuba icala laso ngamanye amaxesha linokuba lincinci kakhulu ukulungiselela izixhobo ezinkulu zasekhitshini ezinje ngeembiza, iipani, iitreyi zokubhaka kunye neekasero.
Phantse akunakwenzeka ukufunxa ipani enkulu kuyo ngenxa yokwahlula phakathi kwezi zitya zimbini. Kungenxa yoko le nto kungacetyiswayo ukuba kusetyenziswe ezinye izinto ezifana nokuhlamba iintsana, njlnjl. Ukongeza ekunciphiseni ukuhlamba izinto ezinkulu, izitya eziphindwe kabini zokuhambisa izitya nazo zibonisa iindlela ezimbalwa zokufaka ufakelo.
Kuyabiza kakhulu ngokwexabiso lempahla kunye nokufakwa kwaye akukhuthazwa ukuba kusetyenziswe kumakhitshi amancinci njengoko kunokuba nzima ukulunga.
YenzaUble Basin ngeDivider esezantsi
Isinki yokuhlambela kabini enesahlulo esisezantsi yiyantlukwano ethandwayo yesinki yesitya esiphindwe kabini. Isitya sokuhlambela esiphindwe kabini esine-diver esisiqingatha nje sokuphakama okanye ubunzulu besinki, endaweni yokwahlulahlula ngokupheleleyo okuya kwinqanaba lesinki ephezulu. Luhlobo olufana nokudityaniswa kwesitya esiphindwe kabini kunye nesinki enye.
Isinki yokuhlambela kabini enesahlulo esisezantsi
Iinkonzo zesinki yokuhlalisa kabini enesahluli esisezantsi : Njengakwisinki yesitya esiphindwe kabini, isitya esiphindwe kabini esinamalungiselelo asahlulayo asezantsi silungile ngenxa yokuba bhetyebhetye kunye nokuguquguquka okunika umsebenzisi.
Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nesinki yesitya esitya kabini, olu hlobo lwesinki lunokusetyenziselwa ukuhlamba izinto ezinkulu. Icala elinye linokugcwaliswa ngamanzi asezantsi kwaye lisebenza njengesitya sokuntywila kabini. Kodwa ukuba ufuna ukuhlamba izinto ezinkulu, ungagcwalisa isinki ngamanzi amaninzi de igcwale ukwahlulahlula.
Umthengi wesinki yokuhlalisa kabini enesahluli esisezantsi : Oluqwalaselo lwesitya sokuntywila kabini esinezahluli ezisezantsi kunokuba nzima ukufumana kwaye linani eliqingqiweyo labavelisi elizivelisayo.
Indawo yasefama ekhitshini esinki iyaziwa ngokuzisa uluvo lomnqweno kunye nomtsalane welizwe lawo. Iifama zendlu yokufama, ngamanye amaxesha ekubhekiswa kuyo njengeepronsi zokuntywila zibonakaliswa ngesitya esinzulu esinefaskoti ebanzi enjengepaneli okanye udonga lwangaphambili oluphuma kancinane kwikhabhathi ejikelezileyo ukuze ibumbe umphambili wekhawuntara.
Olu hlobo lwesinki luhlala lusetyenziselwa useto lwasekhitshini ngokwesiko ngenxa yohlobo lwalo lwerustic. Kule mihla, izindlu zokufama ziye zanda ngoku nakwiikhikhini zesitayela sangoku.
Ngokubanzi, iisinki zendlu yasezifama zemveli zinzulu kakhulu kunangaphantsi kwesinki yekhitshi okanye intaba ephezulu yekhitshi. Uyilo lwayo olwahlukileyo lwenza ukuba umsebenzisi eme ngqo phambi kwesitya, kungekho ndawo yokubaleka okanye iikhabhathi ezingena endleleni okanye phakathi, ngaloo ndlela kuphuculwa ukusebenza kakuhle kwekhitshi.
Isinki yendlu yasefama yokuqala yayenzelwe ukumelana nokuxhatshazwa okunzima kunye nokunxiba kwemihla ngemihla kwekhitshi eluncedo. Kwixesha elidlulileyo, abasetyhini bebeza kuchitha ixesha labo elininzi besinki ekhitshini, belungiselela ukutya ngemilinganiselo emikhulu, behlamba izitya, behlamba iimpahla okanye behlamba neentsana. Iindawo zokuntywila ezindlwini zokufama ziye zaba yindawo yokugcina izinto zabafazi abaxakekileyo ekhitshini.
Izindlu zokufama ezisefama ziza nezinto ezahlukeneyo ezinje nge-iron enameled, i-stainless steel, ithusi, i-porcelain kunye ne-fireclay. Kodwa abo bafuna ukuya kwisinki eyiyo yodidi lwasekhaya, yonke imodeli yodongwe emhlophe yeyona ilungileyo inokuphononongwa. Uninzi lwezi sinki ziyafumaneka kwiindidi ezizodwa zesitya kodwa zinokuthengwa kwiinguqulelo eziphindwe kabini.
Ngokwesiko, iisinki zendlu zasezifama zifakwe ngaphezulu kwetafile emileyo yasimahla ebekwe eludongeni, ngaphandle kweekhawuntari ezingqongileyo. Kodwa kule mihla, olona hlobo luthandwayo lofakelo lweesinki zefama kukuzihlanganisa nekhabhathi kunye neekhawuntari.
Ngokwesiqhelo, iisinki zendlu yasefama zifakwe nje phantsi kwenqanaba lekhawuntara. Ngaloo ndlela, kulula ukusula amanzi kwi-countertops ebusweni ngqo kwi-sink ngenxa yokuba i-counter igqithise ngaphaya kwamacala e-sink. Ngenxa yolwakhiwo olwahlukileyo nolukhethekileyo, izindlu zokufama ezifuyayo zifuna ikhabethe kunye neetafile.
Iinkqubo zokuntywila kweefama Iindawo zokuntywila ezindlini zasefama zilungele umpheki okhutheleyo njengoko ibonelela kwigumbi elikhulu lomsebenzi wokulungiselela ukutya kunye nokucoca. Ubungakanani bayo obukhulu bunokusetyenziselwa ukuhlamba izinto ezinkulu ezinje ngee-casseroles, iimbiza zesitokhwe sokuhombisa iipani kunye neetreyi.
Kwaye kuba akukho sithuba phakathi kwesinki kunye nomphetho wekhawuntara, umsebenzisi angasondela kangangoko esinkini xa esenza imisebenzi yemihla ngemihla, enceda ukunciphisa uxinzelelo lomzimba, ukudinwa kunye noxinzelelo lwezihlunu kwinkqubo.
Isishwankathelo, izindlu zokufama ezilula zisebenza ngokulula xa kuthelekiswa naphantsi kwentaba kunye neesink zokunyuka kweentaba. Ukongeza kwezi zibonelelo zibonakalayo, iisinki zeefama nazo zilula kakhulu ukuzigcina. Zinciphisa ukutshiza kunye nokuchitheka
Umngcipheko wezindlu zokufama : Njengoko sele kukhankanyiwe, isinki yendlu yasefama ekuqaleni yenzelwe ukuba incinci; y phuma kwikhabhathi ejikelezileyo. Kananjalo, amanzi aqukuqela ukuhla esinkini aya kuhla aye ngqo emgangathweni kunokuba afike kwiikhabhathi.
Nangona unciphisa umngcipheko wokonakalisa iikhabhathi zakho, umgangatho wakho ngoyena uya kuba sengozini kuba ufumana onke amanzi avuza. Qinisekisa ukuba uhamba kunye ne-ceramic tile flooring okanye nayiphi na i-flooring resistant flooring njengenyathelo lokukhusela.
Iifama zendlu yokufama nazo zihlala zibiza kakhulu kunezinye iintlobo zokuntywila ekhitshini. Kwaye rhoqo, bafuna umsebenzi ongaphezulu ukuba bawufake, oguqula iindleko ezongeziweyo kwezabasebenzi. Ukongeza kwiindleko zabasebenzi kunye nezinto eziphathekayo, iimfuno zesikhabhathi zesinki zeefama zasendlini ziya kuba yinkcitho eyongezelelweyo.
Uninzi lwamakhaya anamhlanje lubonisa izitya zekhitshi enye. Isitya esinye sekhitshi lesinki, njengoko igama lisitsho, liqulathe isitya esinye ngaphandle kwesahluli.
Iinkonzo zesitya esinye sokuntywila Isibonelelo esisisiseko sokuba isitya esinye sokuntywila sinikezela ngokuguquguquka kunye nokuguquguquka ngokwendlela yokusebenzisa kunye nokusetyenziswa. izitya ezizodwa zesitya zifumaneka kuluhlu olubanzi lobungakanani, ezenza ukuba zilungele nakuphi na ubungakanani bekhitshi, ngakumbi ezo zinendawo encinci yokulinganisa.
Banokulingana isikali esincinci sekhitshi ngokuthelekiswa nesinki ephindwe kabini okanye kathathu esinkini ezinotyekelo lokugqitha isithuba.Izitya zokuhlambela ezizodwa zihlala zifumaneka ngobungakanani be-compact, ezenza ukuba zilungele iimeko apho indawo ikwipremiyamu.
Ngokungafaniyo nesinki esinezitya eziphindwe kabini ezinokuthintela kakhulu ekuhlambeni izinto ezinkulu, isitya esinye sendawo enesitya esikhulu sinendawo enkulu yokuhlala iimbiza ezinkulu, iipani okanye iitreyi zokubhaka. Unokubeka ipani yokubhaka ethe tyaba ngaphakathi kwisitya esinye sokubhaka, ukuvumela ukucoca ngokulula kunye nokuhlamba.
Ngaphandle kwalonto, izitya zekhitshi ezizodwa nazo zilula kakhulu ukuzigcina xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokuntywila. Ukucoca kulula kwaye kuyakhawuleza ngenxa yeekona ezincitshisiweyo kunye nemiphetho.
Izitya ezityiwayo ezizodwa zifumaneka ngokubanzi kwimarike, oko kuthetha ukuba kukho nezinye iindlela ezahlukeneyo zokhetho kumbhobho wayo. Ukongeza oku, isitya esinye esitshini esityikityiweyo sikwavumela ukubekwa ngokulula kwemipu.
Ingafakwa njengeProjekthi yakho ngokwakho kwaye ifuna izixhobo ezilula ukuyifaka. Kubiza ixabiso eliphantsi kunezinye iintlobo zokuntywila ekhitshini kwaye kungenisa iindleko ezincinci xa kufikwa kufakelo.
Bendlela isitya isitya esinye : Ngelixa izitya ezityiwayo eziphindwe kabini zibonisa indlela elula yokwenza imisebenzi emininzi, kunzima ngakumbi ukusebenza kwimisebenzi eyahlukeneyo ngaxeshanye kulungelelwaniso lwesitya esinye.
Nangona kunjalo, kulula kakhulu ukuyisebenzisa ekuhlambeni nasekuhlambeni izitya, kodwa ukuba uluhlobo olufuna isinki yokulungiselela ukutya ngelixa uhlamba izitya, emva koko isitya esinye esityeni asisiyo ukhetho olufanelekileyo kuwe.
Uninzi lweesinki ezizodwa azinakwakhiwa kwitreyi yokomisa, ke qiniseka ukuba ubonelela ngendawo yokumisa ecaleni ukwenza lula imisebenzi. Ngenye indlela kwaye ukuba uziva ukuba isitya esinye senkinki asonelanga ukuhlangabezana neemfuno zakho, ungafaka enye kwikhawuntara ye-perimeter emva koko usete enye isink esongezelelweyo kwisiqithi sakho.
Ukuba ucwangcisa ukugcwalisa isinki yakho ngamanzi xa ufunxa izitya okanye iimbiza, isitya esinye esitsayo siya kufuna amanzi kunye nesepha. Ukuntywila kwisitya esinye esikhulu kunokufuna indawo yokubala engaphezulu
Ukunyuka kweentaba eziphezulu lolona hlobo luqhelekileyo lwesinki yekhitshi. Isink yokubeka intaba ephezulu ukufakela phezulu okanye ngaphezulu komphezulu wetafile.
Ngokwesiqhelo, umngxunya unqunyulwa kwizinto ezisemaphaketheni ngokusekwe kwitemplate yesinki eyiyo. Isinki iphoswa emngxunyeni, emva koko irim yayo itywinwe nge-caulk okanye i-silicone ukuyithobela ngokupheleleyo kwi-counter.
Le ndlela yofakelo ikwasisizathu sokuba kutheni ekubhekiswa kubo njengakwiindawo zokutshona. Isinki ezixhonywe phezulu ziyaziwa ngokuba ziiriming ezinyukayo, umphezulu onyusiweyo okanye ngaphezulu kokuntywila kumgxobhozo. Ngokungafaniyo phantsi kweesinki zentaba, imilebe ejikeleze umjikelezo wesinki yentaba ephezulu iyabonakala.
Izinki zentaba eziphezulu ziyafumaneka ngokubanzi kwimarike kwaye zithengiswa ngezinto ezahlukeneyo ezinjenge-iron enamel, i-porcelain, iglasi, kunye ne-vitreous china kunye nentsimbi engenasici. Isinki yentaba ephezulu inokuba sisitya esinye okanye kabini, okanye kwezinye iimeko isitya esithathu.
Iinkqubo zokuntywila okuphezulu kwentaba : Eyona nto ilungileyo yokuba isinki yentaba ephezulu ngamaxabiso ayo afikelelekayo. Ngokwezinto zombini izixhobo kunye nomsebenzi, iisinki zentaba ephezulu zitshiphu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokuntywila. Ngapha koko, ungathenga iisinki eziphakamileyo eziphindwe kabini kwiivenkile zokuphucula amakhaya ngexabiso eliphakathi le- $ 200 ukuya kwi-250 yeedola, ephantse ibe sisiqingatha sexabiso layo elingaphantsi komlingane wentaba.
Ukongeza kwixabiso elifanelekileyo, iisinki zentaba ephezulu zikwanobuhlobo be-DIY kwaye zinokufakwa ngaphandle kwezakhono ezizodwa ezifunekayo, ngokuxhomekeka ekubeni umngxuma sele usikiwe endaweni kumphezulu wecomputer.
Ukufakwa kweesink zokubeka phezulu kunokugqitywa kungaphelanga iyure okanye njalo. Ukuba kwenziwe yingcali, ixabiso lofakelo lweesink zokubeka phezulu likwindawo ephantsi kunesinki yentaba kwaye inexabiso eliphakathi leedola ezingama-50.
Ukucwila kweentaba eziphezulu kusebenza nakwiindidi ezininzi zezinto zokubala. Inokudityaniswa phantse kuyo nantoni na, ukusuka kumatye endalo anje ngeemabhile okanye igranite, kwizinto zokwenziwa njenge-quartz, umphezulu oqinileyo okanye iithayile.
Ukuba ibekwe ngaphezulu kwento ethe tyaba njengemabhile, isinki yentaba ephezulu inokunceda ukukhusela imiphetho yayo.
Nangona kunjalo, iisinki zentaba ephezulu azisebenzi kumacwecwe e-laminate countertops. Ngokwenyani, i-laminate ayisiyongxaki kolu hlobo lofakelo kodwa izinto ezingaphantsi eziqhotyoshelwe kuyo, njenge-MDF okanye ipartboard.
Iibhodi zefibre ezixineneyo phakathi zibuthathaka kakhulu ukuba zingabamba izinto zokubopha ngaphandle kwezincedisi, ezinje ngezikrufu, amandongomane, iibholiti okanye iwasha. Isinki yentaba ephezulu ayinyanzelwanga ngobungakanani ziindonga zekhabhinethi yakho.
Olunye uncedo olubalulekileyo lokuntywila kumanqwanqwa aphezulu kukufikeleleka. Ngomgxobhozo wentaba ephezulu, zonke iindawo ezisebenzayo zesinki ziyabonakala kwaye ziyafikeleleka. Kananjalo, olu hlobo lwesinki lucoceka ngokulula, ngokungafaniyo naphantsi kweesink zokuntywila apho umsantsa ophezulu apho ujoyina ikhawuntari unokuba ngumda wolwakhiwo lwentsalela yokutya.
Nangona kunjalo, kwezinye iimeko, umthungo obonakalayo owenziwe phakathi kwe-countertop kunye nomlomo okanye udini lwesinki yentaba ephezulu inokuqokelela i-gunk nayo, oko kukuthi ukuba ayifakwanga kakuhle nge-silicone sealant. Amabhithi okutya ancanyathiselwe ngaphantsi komlomo anokubangela ukukhula komngundo ongafunekiyo kunye neebhaktiriya.
Kodwa njengoko kukhankanyiwe, kunye neesink zokubeka phezulu unokubonakala ngakumbi kokukhula kwesikhofu okanye ubumdaka kwaye unokuyilungisa ngokukhawuleza. Kukwacetyiswa ukuba isinki yentaba ephezulu iphinde iphindwe yenziwe okanye iphinde isetyenziswe ngetywina rhoqo emva kweminyaka emithathu ukuya kwemihlanu.
Umxhasi weentaba eziphezulu Kwabaninimzi abaninzi, eyona nto iphambili kwisink yokuphakama kwentaba kukubonakala kwayo. Izinki zonyuko oluphezulu azinayo inkangeleko entle ngokungafaniyo nesinki zokuhla ezinembonakalo yanamhlanje.
Isink yokunyuka kwentaba inomdla wokungabikho kwesibheno kwaye ijongeka ingathandeki xa ibekwe ngaphezulu kwekhawuntari eyenziwe ngezinto eziphezulu ezifana negranite, i-quartz okanye imarble, kuba zigubungela imiphetho yezinto ezisemgangathweni.
Ngokumalunga nolondolozo lwemihla ngemihla kunye nokusetyenziswa, irim okanye umlomo wesink yokuphakamisela phezulu nayo inokubangela ingxaki kuba iyakuthintela ekutshayeleni inkunkuma, ukuchitheka kwamanzi okanye ukuphuphuma kumphezulu wekhawuntara ngqo kwisinki. Nangona ukucocwa ngokulula kulula ngakumbi kwaye onke amalungu esinki afikeleleka kakhulu, irim okanye umlomo wesink yokuphakama kwentaba nayo kufuneka icocwe rhoqo.
Izinki zokudityaniswa yenye yezona zinto zintsha zisebenzayo kwindawo yoyilo ekhitshini. Zithathwa njengeziphakathi kwezona nketho zitshona zomeleleyo namhlanje, zinika eyona mgangatho ubalaseleyo kunye nokuphakama okumangalisayo xa kufikwa kumba wokumelana nobushushu, ukukrwela kunye nokukrwela.
Kwaziwa njengeIlitye elihlanganisiweyo okanye isinki yegranite, Isinki edityanisiweyo yekhitshi yimveliso yobunjineli, ubukhulu becala eyenziwe ngomxube wothuli lwendalo lwamatye exutywe nentlaka ye-acrylic njengesibophelelo. Lo mxube ubunjwe kwifom yesinki kwaye uxinzelelo oluphezulu.
Kukho izinto ezahlukeneyo ezithandwayo zokuntywila ezenziwa kunyeuthuli lwe-quartz kunye nentlaka ye-acrylic, kodwa kukwakho nemixube ye-acrylic ekhoyo emarikeni.Ubunzima bendalo kunye nokubonakala okucacileyo kweesinki ezidityanisiweyo zivela kulwakhiwo olwahlukileyo lwezixhobo, ulwakhiwo olucekeceke kunye nokuxinana kwelitye eliphezulu.
Iinkonzo zesinki zokudibanisa Olona ncedo lukhulu kunye nolona phawu lubalulekileyo lwezinto zokuntywila kukuzinza kwazo ngokugqithileyo. Njengoko sele kukhankanyiwe, ayikho enye into esinki enokulinganisa ukumelana kwayo nobushushu.
Izinki ezidityanisiweyo zinokumelana namaqondo obushushu ukuya kuthi ga kwi-535 degrees Fahrenheit, oko kuthetha ukuba azinako ukonzakala kumonakalo osuka kwiimbiza ezishushu kunye neepani. Ngaloo ndlela, ukuphazamisa umphezulu we-sink yinto encinci yexhala lakho.
Ukongeza kukumelana nobushushu, iisinki ezidityanisiweyo nazo ziyakrwelela kwaye azitshixeki okanye zibambe. Ngokuqinisekileyo ayinakutshatyalaliswa zixhobo ezibukhali, izinto zesilivere okanye izitya ezilahliweyo.
Izinki ezidityanisiweyo nazo azinyani kwaye zicocekile, zithintela ukukhula komngundo kunye nayiphi na intsholongwane engafunekiyo. Ngokumalunga nofakelo, isinki edityanisiweyo ayifuni naluphi na uhlobo lokutywina, ngokungafaniyo nezinye izinto zokuntywila.
Granite ekhitshini edityanisiweyo isink
Isinki yokudityaniswa ikwabonisa uluhlu olubanzi lokukhetha kunye neendidi. Ziza ngeendlela ezahlukeneyo, ubukhulu, imilo, ukugqitywa, kunye nokukhethwa kombala, okuthetha ukuba banokuthelekiswa naluhlobo luni na lwezinto zokubala.
Ngelixa abamnyama, abamhlophe nabantsundu lolona khetho luthandwayo kumbala wokuntywila emanzini, ziyafumaneka kwimibala ebanzi yemibala yoyilo yokutshatisa nasiphi na iseti yekhitshi okanye isitayile sokuhombisa.
Ukongeza kwinkangeleko enomtsalane, iisinki ezidityanisiweyo nazo zinokubonakala okungaguqukiyo kuyo yonke indawo. Ngokuchasene nesinki yelitye lenyengane yendalo ebonisa ukwahluka kombala kuyo yonke loo nto, isinki edityanisiweyo inombala ofanayo kunye nohlobo olufanayo.
Umthengi weesinki zokudibanisa : Nangona iisinki ezidityanisiweyo bubushushu, amabala kunye nokukrwela okunganyangekiyo, zisenokwenzakaliswa ziikhemikhali ezinobungozi. Unonophelo olukhulu kakhulu kufuneka lubonwe xa kucocwa olu hlobo lweshinki.
Qiniseka ukuba ulandela imiyalelo yomenzi ekucoceni umphezulu wayo kwaye yeyiphi imveliso oza kuyisebenzisa njengeearhente zokucoca kunye nokuphepha ukugalela esinkini.
Ngenxa yobulukhuni bendalo besinki zokudibanisa, iiglasi ziyakwazi ukuqhekeka ngokulula xa ziphoswe kumphezulu wayo, xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokuntywila ezixolela ngakumbi.
Iindleko ezizilumko, iisinki ezidityanisiweyo zibiza kakhulu kunentsimbi yentsimbi kunye nohlobo lwayo lwe-porcelain. Ngelixa isinki edityanisiweyo inobuhle bayo obahlukileyo, ayisebenzi kubanini bamakhaya abafuna ukubonakala kwendalo ekhitshini labo.
Ukuba ujonge imibala eyahlukeneyo ekubukekeni kwesinki, isinki edityanisiweyo isenokungabi yeyakho.
Isinki yebha luhlobo lokuntywila okusetyenziswa njengesixhobo sokuntywila sokulungiselela ukutya. Ngamanye amaxesha kubhekiswa kuyo njengesiqithi sokuntywila okanye isinki yebha kuba ihlala ifakwa kwiziqithi zasekhitshini okanye kwimivalo.
Ukucwila kwesiqithi kuncinci ngobukhulu xa kuthelekiswa neesinki eziqhelekileyo zasekhitshini kwaye zihlala zisitya esinye. Ziza ngobungakanani obahlukeneyo, iimodeli kunye nokugqitywa.
Iinkqubo zokuntywila kwesiqithi :Ukongezwa kwe Isinki yesiqithi sasekhitshini ihlala isisiseko phakathi kokuyilwa kwekhitshi kunye neziqithi ezisembindini ngenxa yezibonelelo ezisebenzayo ezibonelelweyo.
Mhlawumbi elona thuba lixabisekileyo linikayo liluncedo. Isinki yesiqithi isebenza njengendawo yokulungiselela esembindini yokucoca ngokukhawuleza, ukutya okulula kunye nokuhlamba izandla. Ungahlamba ngokulula izithako zakho kwisinki yesiqithi emva koko uyidlulisele kwifriji yakho ukusuka kwisiqithi okanye ungazisa ngokulula kuluhlu lokupheka. Ukongeza, isinki yesiqithi ikwavumela abasebenzisi abaninzi ekhitshini.
Abantu ababini okanye nangaphezulu banokwenza ngaxeshanye imisebenzi ngaphandle kokuphazamisa ukuhamba komsebenzi komnye nomnye. Akukho sidingo sokukhathazeka ngokungqubeka kwengqiniba ngelixa ulungisa ukutya ekhitshini.
Esinye isibonelelo sokufaka isinki kwisiqithi esiphakathi kukuba kugcina ukuvuleka ekhitshini. Isiqithi sekhitshi sinamacala amane avulekileyo, akuvumela ukuba unxibelelane nabantu nangona usenza imisebenzi ekhitshini.
Ngaphandle kwalonto, iitshini zesiqithi nazo kulula ukuzifaka. Ngaphezulu kwayo yonke into, ukongeza isinki yesiqithi kunokunceda ekunyuseni ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya lakho.
Umngcipheko weSinki sokuntywila : Azikho kangako izinto ezisezantsi zokuba nesinki yesiqithi ekhitshini okanye kwibar yakho kuba zizongezo okanye ezongezelelweyo kuphela. Ngamanye amaxesha, abaninimzi bayazifaka ngenjongo yokubonelela ngendawo yokulungiselela ekhitshini, kodwa kunqabile ukuba ziphele zizisebenzisa.
Iisinki ezihlanganisiweyo, ezikwabizwa ngokuba zizidibanisi ezihlanganisiweyo, zizinto zokuntywila ezakhelwe phezulu kumphezulu wecomputer. Ngokungafaniyo nezinye iindidi zesinki, iisinki ezidityanisiweyo zenziwe ngokwesiko okanye zenzelwa ngokwendlela yokubalula kwaye zidityaniswe endaweni kumzi-mveliso.
Luhlobo kuphela lwesinki olungaveliswanga ngabavelisi besinki kodwa endaweni yoko lwenziwe ngabavelisi beekhawuntara ezifana neDupont kunye ne-Samsung.
Izinki ezihlanganisiweyo zenziwe ngezinto zomphezulu eziqinileyo kwaye ezinye zeempawu zazo ezidumileyo ziyiCorian eyenziwe nguDupont kunye neStaron eyenziwe yiSamsung. Nangona ihlala ifumaneka kumagumbi okuhlambela, oku kunokusetyenziselwa usetyenziso lwekhitshi.
Iinkonzo zokudibanisa okudibeneyo : Eyona nto intle malunga neesinki ezidityanisiweyo kukuba baziphelise zonke izinto ezisezantsi zokuntywila kumgxobhozo wentaba kunye nangaphantsi kweesink.
Ngeesinki ezidityanisiweyo, akukho zindawo zinengxaki ezinje ngemilebe okanye iirimu, ezinciphisa ukubakho kwe-gunk. Iintsalela zokutya, ukungcola kunye namanzi kunokucocwa ngokulula kuba ikhawuntari ihamba ngokungenamthungo kwisinki.
Ukongeza kwizibonelelo zayo ezifanelekileyo kunye nolondolozo olulula, iisinki ezihlanganisiweyo zikwabonelela ngenkangeleko ecocekileyo kunye nembonakalo engenamthungo. Utshintsho olugudileyo phakathi komphezulu we-countertop oqhubeka usihla kwisinki uhambelana nobuhle obuncinci beesetingi zangoku kunye nezangoku.
Kwaye ekubeni iisinki ezihlanganisiweyo zenziwe ngezinto ezifanayo njenge-countertop, lindela ukuba banobunzima obufanayo kunye nokuqina.
Umhlaba oqinileyo odibeneyo wokuntywila waziwa ngokungahambelani ngokwendalo namabala. Azonakalisi ngokulula kwiimpembelelo kwaye zithintela ukukhula kweebhaktiriya kunye nokubumba.
Umxhasi weesinki ezidibeneyo : Olona phawu luphambili lwesinki yokudityaniswa lixabiso labo eliphezulu. Zibiza kakhulu kunesinki eqhelekileyo engenasici.
Izitya zeefron kunye neesinki zasefama ziyimigangatho etshintshanayo kwishishini loyilo lwekhitshi. Ngokwembonakalo, zombini ezi ntlobo zesinki zijongeka ngokufana. Nangona kunjalo, kukho umahluko omncinci phakathi kwezi zimbini.
Isinki yendlu yasefama sisisitya esinzulu esigqityiweyo kuwo omane amacala ngefaskoti ebanzi enjengephaneli okanye udonga, ngelixa isinki ifaskoti, indawo egqityiweyo iphambili kuphela.
Kwakhona, indawo yokuhlalisa indlu esefama luhlobo lwesiseko esinzulu, ngelixa isitya sekhitshi sinomlomo apho ikhabinethi okanye i-countertop ibuyela emva.
Ibizwa ngokuba yiprinki yesinki ngenxa yepaneli enkulu ejonge phambili ebekwe ngaphambili kwicala lesinki.
Indlu yefama yefillet fire sink
Ukulunga kweefaski zekhitshi : Izinto eziluncedo kwisitya sefaskoti kunye nesinki yendlu yefama ngokucacileyo ziyafana. Iifenitshala zangaphantsi zekhitshi zinamandla amakhulu xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zeshishini lekhitshi, ezenza ukuba lukhetho olufanelekileyo kubapheki abanomdla.
Isinki ye-apron ayiniki kuphela indawo enesisa yokucoceka kunye nokulungiselela ukutya, kodwa inokusetyenziselwa neminye imisebenzi efana nokuhlamba isilwanyana okanye usana.
Izinto ezinkulu ezinje ngecasserole, iitreyi zokubhaka, iipani kunye neembiza zesitokhwe zinokulingana ngokulula kwisitya se-apron kwaye siyisebenzise kulula kuba akukho khabinethi ingena phakathi.
Okokugqibela, isinki zangaphambili zepronsi zinokunceda ukunciphisa ukutshiza kunye nokuchitheka kwaye kulula ukuzigcina.
Umxhasi weefowuni zekhitshi : Nawuphi na ulwelo oluvuzayo phambi kwesinki yakho yefaskithi luya ngqo kumgangatho wakho, mhlawumbi lubangele umonakalo ukuba izinto zakho zangaphantsi azithembekanga.
Iindleko zeepron zitshona yenye yezona zinto ziphazamisayo ngenxa yokuba ngokubanzi kuyabiza kunezinye iindidi zokuntywila. Ngaphandle kwalonto, i-apron sink inzima kakhulu ukuyifaka kwaye iya kuhlala ifuna ikhabethe yesiko.
Isinki emnyama ekhitshini yinto entsha yokuthatha isiqhelo, isinki emhlophe esemgangathweni. Ngokwesiqhelo, olu hlobo lwesinki lwenziwe ngegranite edityanisiweyo okanye ngeceram.
Isinki emnyama yasekhitshini ngokubanzi inegalelo kwifashoni enesitayile ekhitshini. Olu hlobo lwesinki lunezinto ezahlukeneyo eziluncedo kunye nezinto ezingalunganga kuxhomekeka kwinto esetyenzisiweyo kwimveliso yayo. Nangona kunjalo, ngezantsi ezinye zeempawu zayo ezibonakalayo.
Ukulunga kwamashinki amnyama ekhitshini -Ngokwembonakalo, iisinki ezimnyama zasekhitshini zinomtsalane oqinisekileyo kunye nobuchwephesha ogqibeleleyo kuseto lwangoku lwekhitshi.
Kuba inombala ongathathi hlangothi, isebenza ngokugqibeleleyo kuninzi lwemibala, kodwa ijongeka imangalisa ngakumbi xa idityaniswe nezixhobo zasekhitshini ezimnyama kunye nokuhombisa.
Ngenye indlela, isinki emnyama yekhitshi ingasetyenziselwa njengendawo ekugxilwe kuyo ekhitshini lakho, ngakumbi xa kuthelekiswa nemibala ekhanyayo. Xa kuthelekiswa neesinki ezimhlophe zekhitshi, iisinki ezimnyama zekhitshi ziya kugcina ukubonakala kwazo ixesha elide.
Olu hlobo lwesinki lulondolozo olusezantsi kwaye kulula ukulicoca. Ngenxa yombala wayo omnyama, ayibonisi naluphi na uhlobo lokungcola ngokulula. Amabala akwenzi nakwiisinki ezimnyama xa kuthelekiswa nesinki ezinemibala ekhanyayo. Okokugqibela, uninzi lweesinki ezimnyama zilinganisiwe ukuba zisetyenziselwa umsebenzi onzima kwaye zinokumelana nokunxiba kwemihla ngemihla.
Umthengi weesinki ezimnyama zekhitshi - Ngokubanzi, iisinki ezimnyama zekhitshi zibiza ngaphezulu kweesinki ezimhlophe zekhitshi. Xa kuthelekiswa neesinki ezimhlophe ezinokwenza ikhitshi ibonakale inomoya ngakumbi, icocekile kwaye ikhanya, isinki emnyama ayisebenzi kunye neziphumo ezifanayo. Akuncedi nto ekukhanyeni.
Ngaphandle kobungakanani obuqhelekileyo besinki yekhitshi engama-20 ukuya kuma-30 e-intshi, uninzi lwabathengisi besinki beekhitshi bavelisa iimodeli ezincinci ezilungele kakhulu iindawo zokuhlala ezincinci ezinjengeeflethi, izitudiyo okanye izindlu.
Rhoqo, isinki encinci yekhitshi iyafumaneka kwimodeli enye yesitya. Akunakufane ufumane iisinki zekhitshi ezinezitya eziphindwe kabini okanye izitya eziphindwe kathathu ezenzelwe ukulungelelanisa iindawo ezincinci zokubala. Olunye lweentlobo eziqhelekileyo zokuntywila kwamakhitshini zitshini zebhari okanye zokuntywila kwesiqithi.
Ukulunga kweesinki ezincinci zekhitshi Isibonelelo esiphambili sesinki encinci yekhitshi inceda ukwandisa indawo encinci yokubaleka, ngelixa ibonelela ngendawo esisiseko yokucoca kunye nokulungiselela ukutya.
Umthengi wesinki encinci yekhitshi : Ngenxa yezizathu ezicacileyo, isinki encinci yekhitshi ayizokwazi ukufaka inani elilinganayo lezitya kunye nobukhulu obufanayo bezinto ezinokulingana nesinki esemgangathweni.
Akucetyiswa ukuba amakhaya akonwabele ukusingatha iindibano ezinkulu, nangona kunjalo, lolona khetho lufanelekileyo kwi-bachelor / bachelorette, isibini, umfundi okanye izindlu ezinomhlali omnye ukuya kwababini. Iitshini ezincinci zekhitshi zinokuba nzima ngakumbi ukusebenza nazo ngenxa yesayizi yazo encinci.
Isitya esine-stainless steel basin kabini isinki enzulu
Ubunzulu besinki esinkini buhluka kakhulu ukusuka kwi-intshi ezi-6 ukuya kwezi-12. Ukuba ujonge isitya esinzulu oza kusebenza naso ekhitshini lakho, jonga iimodeli ezingena nge-intshi ezi-8 ukuya kwezi-12 ubunzulu kwaye zinobubanzi obungama-intshi ama-33 ukuya kuma-36.
Ukulunga kweesinki ezinzulu zekhitshi : Olona thuba lubalulekileyo lokubonelela ngesinki esinzulu setekhnoloji kukungahambelani. Isinki esinkini esinkini esinzulu sikuvumela ukuba uthambe ngokulula okanye uhlambe iipani ezinkulu, iimbiza zesitokhwe, uninzi lwezitya.
Ngaphandle kwalonto, kuluncedo olukhulu ekulungiseleleni ukutya okuninzi. Nokuba ungumpheki okhutheleyo okanye akunjalo, isinki enzulu inokunceda ukubonelela ngendawo elula yokusebenza kunye nekhitshi.
Isinki yokuma simahla luhlobo lwesinki yokuhambisa enesiseko okanye imilenze, ngokungafaniyo nezinye iintlobo zesinki ezihlala zifuna ikhabhathi esisiseko yofakelo. Esikhundleni sokuqhotyoshelwa kwi-countertop, izitya zokumisa ezikhululekile zihlala phantsi kwisiseko sokuzimela. Iza kuluhlu olubanzi lwezixhobo, kodwa iyafumaneka ngakumbi kulungelelwaniso lwesitya esinye kunye neebhodi zokumisa.
Abanye babanini bamakhaya bakhetha ikhitshi elongeziweyo ngaphandle kwamakhaya abo, apho banokulungiselela ukutya ngexesha lamatheko okanye ukubamba iindibano ezibalulekileyo. Kwaye ekubeni ikhitshi langaphandle lixhotyiswe ngokupheleleyo ngendlela efanayo nekhitshi elingaphakathi, enye yezona zinto ziphambili kukuzika kwekhitshi.
Xa kuziwa ekukhetheni isinki efanelekileyo yekhitshi yokusetyenziselwa ngaphandle, qiniseka ukuqaphela izinto ezimbini ngokubanzi: ukuhlala ixesha elide kunye nokugcinwa okuphantsi. Indawo zokuntywila zasekhitshini zifuna ukomelela kulo naluphi na uhlobo lwangaphandle kwaye kufuneka zenziwe ukumelana notshintsho lwemozulu kunye neqondo lobushushu.
Kuba iisinki ziveliswa ukuze zilungelelane namanzi (okanye zingenakuchukunyiswa ngokwendalo), uninzi lweentlobo zalo ziya kusebenza kakuhle kuseto lwangaphandle. Olona hlobo luxhaphakileyo lweesinki zokusetyenziswa kwangaphandle lwenziwe ngentsimbi engenasici, kodwa ezinye iindlela ezinje ngobhedu, ikhonkrithi, imabhile, ilitye lesepha kunye negranite zizinto ezinokuthenjwa.
Kwizitshixo zangaphandle zentsimbi ezingenasici, qiniseka ukuba ujonga isinyithi esinobukhulu obulungileyo, igeji kunye nomgangatho.
Ukuntywila ngobhedu kukwenye into efanelekileyo yokukhetha irusi kwaye akukhuthazi ukukhula kwesifo.
Ukuba ukhetha ukuhamba ngeesinki zangaphandle zobhedu, khetha enye enomgangatho ophezulu njengoko abo banobhedu obuncinci bungasabela ngokwahlukileyo kwizinto zangaphandle kwaye banokuthi bajike buluhlaza ngokuhamba kwexesha.
Izinki zekhonkrithi zekhonkrithi lolunye ukhetho olulungileyo kuseto lwangaphandle kuba zifuna ulondolozo olusezantsi.
Kungakhathaliseki ukuba luhlobo luni lwezinto kwizinto zekhitshi lakho langaphandle, qiniseka ukuba uligcina rhoqo ukuze wandise ixesha lokuphila.
Sula usebenzisa ilaphu elifumileyo kunye nesicocisi esinesitya esincinci - isisombululo samanzi sokucoca nokususa naluphi na uhlobo lwenkunkuma efana nentsalela yokutya, amagqabi okanye amasetyana anokubambeka kuyo. Unako kwakhona ukuthenga izembozo zangaphantsi zokuzikhusela xa zingasetyenziswa.
Ukulungiselela useto lwangoku lwekhitshi, qiniseka ukuba uhamba nesitayile sokuntywila esine-aesthetics encinci, ifom ye-angular kunye noyilo oluhlengahlengisiweyo.
Isitshixo kukukhetha isinki eya kudala ukubonakala okuhle xa ibekwe kwikhawuntara yakho yasekhitshini. Jonga iisinki ezinemiphetho ethe nkqo kunye neenkcukacha ezincinci. Ezona ndlela zithandwayo zokuntywila emakhitshini ezisetyenziselwa useto lwangoku lwekhitshi yigranite okanye iquartz edityanisiweyo, iisinki zentsimbi engenasici kunye neesinki ezihlanganisiweyo.
Iisinki ezidityanisiweyo lukhetho olufanelekileyo kwizitshini zangoku zekhitshi kuba zenza utshintsho oluhle phakathi komphezulu wecomputer kunye nesinki uqobo. Isinki zesinyithi ezingenasici nazo zikhethwa ngokuthandwayo kwiisinki zangoku zekhitshi ngenxa yombala wazo obukhali, ukugqitywa okugqityiweyo kunye nokubonakala kwemizi mveliso.
Ikhitshi lesitayile selizwe konke malunga nokuvelisa i-vibe ebuyisiweyo, ukufudumala kwendalo kunye nokucoceka okuhlala kukuziva. Kwaye eyona ndlela ilula yokukhupha eli lizwe linomtsalane kunye nemveli yendalo kukusebenzisa isinki yendlu yefama.
Uninzi lwabanini bamakhaya ludla ngokuhamba nolu khetho kuba izindlu zasemaphandleni zineenkangeleko zakudala ezisikhumbuza ngokutya okuphekiweyo okudala kwasekhaya kunye nokuhlala ecaleni kwelizwe.
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zokuntywila ekhitshini njengeesinki zentsimbi ezingenazintsimbi ezijolise kubuhle bezi mini, indawo yokuhlalisa indlu esefama inokubonakala okungaqhelekanga.
Isitshixo sokuvuna esizimeleyo sevini
Ngokwamagama ayiliweyo, iidiliya zibhekisa kwizitayile ezaqala nge-1930's ukuya kwi-1950's. Ezi zitayile ziyaziwa ngokudlala, iklasikhi kunye nokuba nomtsalane we-retro. Xa ujonge iisinki kuseto lwekhitshi yeediliya, khetha into eqhuba imvakalelo endala.
Olona loyilo ludumileyo lwesinki zekhitshi lokuvuna zinemilo yoxande enemiphetho ejikelezileyo, umphambili ogcweleyo, owakhelwe kwi-splashboard ebanzi kwaye ujongeka ngokubanzi.
These kumgxobhozo ngokwesiqhelo ibunjwe kwaye iza yakhelwe kwibhodi yokomisa, nokuba ngaba isitya esiphindwe kabini okanye imodeli yesitya esinye. Ezinye izinto ezithandwayo ezisetyenziselwa izitya zekhitshi zeediliya zenziwe nge-ceramic, porcelain, fireclay kunye ne-iron cast sinks.
Ukugqibezela ukubukeka kweediliya ekhitshini lakho, qiniseka ukuba ubhangqa isinki ngesinyithi esimnyama okanye se-antique esigqibeleleyo sesimbo sendlela kunye nokufakwa.
Insimbi engenasici yeyona nto ithandwayo isetyenziselwa isinki. Ngapha koko, malunga neepesenti ezingama-70 zeesinki ezithengiswa kwimarike zenziwe zezi zinto. Ukulula kunye nokusebenziseka kokuntywila kwentsimbi engenasici kwenza ukuba kube lula ukuya ekhitshini.
Zininzi iisinki zensimbi ezingenasici ezikhoyo emarikeni kwaye ziza kwisitya esinye, isitya esiphindwe kabini okanye iindidi ezintathu zesitya kwaye zinokubekwa phezulu okanye zithotywe. Olunye uphawu olukhokelayo lwentsimbi engenasici yiFranke.
Isinki zentsimbi ezingenasici zahlelwa ngokwe gauge. Umgangatho ophantsi wegeji yentsimbi engenasici nguwo, ubunzima bezinto eziphathekayo kunye nokuphakama kwegejiji, ukukhanya kokukhanya.
Uninzi lweesinki zensimbi ezingenasici ezithengiswa kwimarike ziwela ngaphakathi kwe-15 ukuya kwi-24 gauge, ngelixa ezo zisetyenziselwa indawo yokuhlala zihlala ziphakathi kwe-18 ukuya kwi-22. Ngee-intshi, eziguqula amashiti anobunzima obuhlukeneyo ukusuka kwi -048 ″ ukuya kwi -030 ″.
Ngokwemvelo, xa sicinga ngentsimbi engenasici, uninzi lwethu lucinga ukuba ubunzima obunzima bensimbi engenasici bulingana nesinki eqhuba ngcono.
Nangona kunjalo, oko akusoloko kunjalo njengoko kuye kwafakazelwa ukuba igeji yensimbi inefuthe elincinci kakhulu kumgangatho wokuntywila. Nangona ngokubanzi, isinyithi esinki esinki esinegeyiji enzima iyamelana ngakumbi nokufaka amazinyo. Ngaphandle kwalonto, benza nengxolo encinci.
Ifaskoti engenanto yesinki
Ukulunga kweesinki zentsimbi ezingenasici : Uninzi lwabanini bamakhaya ludla ngokuhamba ngeesinki ezingenasici kuba zinokutshatisa ngokulula izixhobo ekhitshini ezinje ngezibambo, iifompo kunye nezixhobo. Banokulingana naluphi na uhlobo loyilo lobugcisa, nokuba ingaba yikhitshi yanamhlanje okanye yanamhlanje.
Isinki zesinyithi ezingenasici nazo zikwanikezela ngokuhambelana ngokubhekisele kufakelo. Unokujonga ukwehla kweendidi ukuba ufuna ukwenza kufakelo njengeprojekthi ye-DIY. Iindleko ngobulumko, iisinki zensimbi engenasici zinokufikeleleka kakhulu. Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo izinto zokuntywila, steel stainless iindleko ngaphantsi. Nangona beza kwiindidi eziphezulu ezinokuthi ziye kufikelela kwi-300 yeedola kwiimveliso zoyilo ezinjengeKohler kunye neBlanco.
Okokugqibela, iisinki zensimbi engenasici nazo ziyamelana nobushushu, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba ukhathazeke ngeepani ezishushu okanye iimbiza ezonakalisayo.
Umxhasi wesinki engenasici : Nokuba zithathwa njengezomelele kakhulu, iisinki ezingenasici ezingenanto zinokukrwela ngokulula ngakumbi kunezinye izinto. Bayathandeka nakwiimpawu zamanzi ,, ezingathandekiyo kumbono.
Isinki yesinyithi engenasici inokuba nzima ngakumbi ukuyicoca kunye nokugcina ukubonakala okuncinci kunokuba nzima. Ngaphandle kwalonto, iisinki zensimbi ezingenasinxibo zihlala ziphakamile kunezinye izinto, ke isilivere kunye nezinye iimbiza kunye neepani eziwe kumphezulu wayo ngamanye amaxesha zinokwenza ingxolo kunye nokubetha. Kodwa ingxolo inokuncitshiswa ngokutshiza, ukutyabeka okanye ukugoba isinki.
Ixabiso lesinki engenasici : Kwi-avareji, iindleko zeshishini lesinki elingena-stainless ukusuka kwi-100 ukuya kwi-800 yeedola.
I-porcelain enkulu yesitayile sokuntywila
Ikwabizwa ngokuba yi-ceramic, i-porcelain luhlobo lwezinto zokwakha ikakhulu ezenziwa ngumxube wodongwe lwendalo, iglasi kunye nesinyithi. Yayenziwe e-China ekuqaleni kwenkulungwane ye-7 njengezinto eziphambili zokudala ubumba kunye ne-dinnerware exabisekileyo.
Kule mihla, siyayazi i-porcelain njengenye yeentlobo ezithandwa kakhulu kwiithayile, kodwa ikwasetyenziswa rhoqo njengezinto zokuvelisa iikhitshi kunye neesinki zokuhlambela.
Yintoni eyahlula i-porcelain kwezinye izinto kukufunxa kwamanzi okufuma okuphantsi okanye i-porosity ephantsi. Esi sesona sizathu siphambili sokuba kutheni iithayile ze-porcelain zilinganiswe njengezingezizo i-vitreous, oko kuthetha ukuba azinakungenwa ngamanzi kunye nokufuma.
Ngokumalunga nokusetyenziswa kwesinki yekhitshi, i-porcelain inceda ukuthintela ukuvuza kwaye yenza izinto ezihlala ixesha elide ezinokumelana naluphi na uhlobo lokuxhatshazwa kwamanzi.
Ngokwesiqhelo, iisinki eziqinileyo zekhitshi le-porcelain zimhlophe ngombala, kodwa ziyafumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala kunye neemilo ezinokusetyenziselwa naluphi na uhlobo lwesitayile sasekhitshini.
Kukho iiyantlukwano ezahlukeneyo zesinki ze-porcelain ezenziwe ngensimbi yentsimbi okanye ngentsimbi egqunywe ngumaleko we-porcelain enamel ngaphezulu. Oku kunika isinki ukomelela okuzinzileyo.
Phakathi kwezi ntlobo zintathu, i-porcelain eqinileyo kunye neesinki zentsimbi ezenziwe nge-porcelain enamels zinzima ngakumbi kodwa zihlala zomelele ngokuthelekiswa nentsimbi ene-porcelain enamel.
Ukulunga kweesinki zekhitshi ze-porcelain : Enye yeenzuzo eziphambili zokuntywila kweporcelain kukubonakala kwayo kweklasikhi. Kananjalo kwabanye, oku kunokuba yinto engeloncedo kuba inokubonakala ngathi ikwindawo yonke, nangona kunjalo, inokuba yinto elungileyo kuba ukuxuba kunye nokuthelekisa kulula ngakumbi xa kufikwa kwiindlela ezahlukeneyo zoyilo ekhitshini.
Umbala ongathathi hlangothi weesinki zekhitshi ye-porcelain isebenza ngemibala emininzi yemibala kunye nobuhle bayo beklasikhi busebenza ngokungenasiphelo kulo naluphi na uhlobo lokusetwa kwekhitshi.
Ukongeza koku, yongeza ukufudumala kwisithuba xa kuthelekiswa nenkangeleko yokusebenzisa yesinyithi okanye isinki yekhitshi yentsimbi. Oku kukwabonelela ngesibonelelo esongeziweyo esisebenzayo kuba naluphi na uhlobo lobumdaka lubonakala kakhulu kumbala okhanyayo kwaye lunokucocwa ngokulula.
Ngokwesiqhelo, iisinki ze-porcelain nazo zinokujongeka okungaphezulu ngaphandle kweekona, kuphelisa ukubakho kwenkunkuma okanye naluphi na uhlobo lwentsalela yokutya ukuze lubambeke phakathi kweekona. Nangona ezinye iisinki ze-porcelain ziza kwiifom zoxande, uninzi lwazo lusenomda ojikeleziweyo.
Iisinki ze-porcelain eziqinileyo nazo zihlala zomelele kakhulu, kodwa ezo zine-iron okanye isiseko sentsimbi esigqunywe ngoqweqwe lwe-porcelain ziphezulu xa kufikwa kumandla. Azonakalisi kubushushu obuphezulu okanye ekuvezeni ubushushu.
Umngcipheko weesitya zekhitshi ye-porcelain : Kuba i-porcelain sinks zihlala zingaqinanga njengezinye izinto zokuntywila ekhitshini, zihlala zinotyekelo lokophuka, ukuqhekeka okanye i-chip, kwaye ngelishwa olu hlobo lomonakalo alunakulungiswa ngokulula.
Kwezinye iimeko, kunokubakho isidingo sokutshintsha isinki yonke. Nangona kunjalo, iichips ezincinci okanye iintanda ezincinci zinokulungiswa kusetyenziswa izixhobo ezizenzela ngokwakho okanye ngoncedo lweengcali.
Xa kuthelekiswa nesinki zentsimbi engenasici, iisinki zekhitshi ze-porcelain kunzima ukuzigcina zicocekile. Nangona iipads ezirhabaxa zinokusetyenziselwa ukususa nabuphi na ubumdaka okanye ibala kwiisinki zeporcelain, ezi pads ngamanye amaxesha zinokukrwela okanye zenze mnyama umphezulu wazo. Ixesha elingaphezulu, iityhubhu zekhitshi le-porcelain nazo zihlala zilahla kwaye zikhulisa amanye amanqaku angenakususwa.
Nangona ihlala ixesha elide kwaye ingachukunyiswa bubushushu, iisinki zeporcelain zinokonakaliswa ngokulula zizinto ezibukhali. Iimpembelelo ezinzima njengokulahla isiqwenga sezitya okanye iglasiware kunokubangela isinki ukuba ichithe.
Iindleko zesinki zekhitshi ye-porcelain : Izitya zekhitshi zeporcelain kunye neesinki zensimbi ezingenasici zombini zinendleko ezifanayo, ngamaxabiso aphakathi ahamba naphi na phakathi kwe- $ 200 ukuya kwi-400 yeedola. Ukuyilwa kwesinki okwenziwe ngesiko, nangona kunjalo, kubiza ngaphezulu kwaye kunokufikelela kwi- $ 1,000 ngesiqwenga ngasinye.
Isinki yendlu yefama yobhedu eyenziwe ngesando
Isinyithi seCopper sisetyenzisiwe kwizicelo ezininzi zangaphakathi nangaphandle zekhaya, nokuba kungokugqitywa kwezinto, njengezinto zokulungisa, izinto zokuhombisa iimpahla. Kutshanje, le nto ibikade ithatha umphunga njengezinto zekhitshi kunye neendawo zokuhlambela ngenxa yesibheno sayo esiphakamileyo kunye ne-aesthetics eyahlukileyo.
Ngaphezulu konyaka, izitya zekhitshi zobhedu ziye zaba yenye indlela emenyezelayo kwizitshini eziqhelekileyo zekhitshi ezifana nentsimbi engenasici okanye iiporcelains.
Ngokwesiqhelo, iisinki zobhedu zekhitshi zenziwa ngazoIphepha elinye lobhedu elenziwe ngesando kwaye lavezwa emanzini nasemoyeni ukwenza i-patina eyahlukileyo. Le patina inyusa umbala osisityebi weesinki zobhedu, ibanike umbala onzulu ngakumbi.
Ukubonakala okumangalisayo kwekhitshi yobhedu kusinki njengoko ubudala buyenza ukuba bathandwe ngabantu abaninzi njengoko ikhula ngendlela eyahlukileyo ekuhambeni kwexesha. Kwabanye abafuna ukugcina umbala wokuqala ofudumeleyo, izitya zekhitshi zobhedu zihlala ziboshwe ngesigcinakaliso.
Nokuba ujonga inkangeleko yendalo okanye imbonakalo ye-patina endala, iisinki zobhedu ngokuqinisekileyo ziya kunika ikhitshi lakho elitshakunye nesitayile esahlukileyo.
Iindlela zokuntywila ngobhedu ekhitshini : Xa kuziwa kwisibheno kunye ne-aesthetics ebonakalayo, isinki yekhitshi yobhedu iphezulu kwezinto zokuntywila ekhitshini.
Njengoko abanye bebengazichaza, izitya zekhitshi zobhedu zinobukhazikhazi obungunaphakade kunye nembonakalo entle. Ukongeza kubuhle obuphezulu kunye nesitayile esihle, kukho ezinye izibonelelo ezenza isinki yokuntywila isongezo esihle ekhayeni lakho.
Isinyithi sobhedu yi-antimicrobial kwaye sicoceke kakhulu, sikwenza ukuba kufaneleke kakhulu ukuba kusetyenziswe njengesinki yekhitshi. Xa kuthelekiswa nezinye izinto zokuntywila zasekhitshini ezinokukhuthaza ukukhula komngundo ongafunekiyo, ukungunda kunye neebhaktiriya, isinki yobhedu ihlala ibulala ezi zinto ziyingozi kwiiyure ezimbalwa.
Ngale nto, olu hlobo lwesinki yekhitshi lunokusetyenziselwa ukuntywila imifuno okanye iziqhamo, ngaphandle kokukhathazeka ngococeko. Kwakhona, iisinki zobhedu zeekhitshi azonakalisi ngokulula kunye nomhlwa, xa kuthelekiswa nezinye iisinki zesinyithi kuba zinike ipropathi yendalo echasene nokurusa.
Uyilo olumkileyo, isinki yekhitshi yobhedu ibonelela ngeendlela ezininzi kubanini bamakhaya kuba ziyafumaneka kuluhlu olubanzi lweendlela kunye neentlobo.
Ngokuxhomekeka kukhetho lwakho lobuqu kwisitayile, ungahamba ngesinki yekhitshi egqibeleleyo okanye ngenye indlela, unokukhetha ukugqitywa ngesando. Kukho izinto ezahlukeneyo zesinki zekhitshi eziza neenkcukacha zobugcisa kunye noyilo, ezenza ukuba zibe yinto ekhethekileyo kunye nendawo ekugxilwe kuyo ekhayeni lakho.
Umngcipheko wesinki sobhedu s: Kusekho inani lezithintelo ekusebenziseni izitya zekhitshi zobhedu, kwaye enye yeengxaki ezinkulu onokuthi uhlangane nayo kukuziva kwabo okanye inqanaba eliphezulu lokuphinda usebenze kwizinto ezahlukeneyo.
Olu hlobo lwesinki yekhitshi lunomdla wokumnyama ekuhambeni kwexesha kunye namabala ngokulula. Nangona indala kamnandi kunye nobukho be patina, le patina ikwanalo notyekelo lokonakaliswa zizinto ezinjenge asidi, ijusi yelamuni, iviniga okanye intlama yamazinyo.
ukwenza isaphetha ngeribhoni
Izitya zekhitshi zobhedu zikwanobuzaza kumaqondo obushushu ashushu okanye izinto zokucoca ezirhabaxa, ezinokubangela ukuba umphezulu ogudileyo, owenziwe ngehamile wonakaliswe okanye ube rhabaxa.
Xa kuziwa kulondolozo, ukucoca izitya zekhitshi zobhedu kudla ixesha elininzi kwaye kufuna umgudu ongakumbi. Emva kwako konke ukusetyenziswa, isinki kufuneka yomiswe ngetawuli ukuthintela iindawo zamanzi ekubeni ziphuhle.
Umphezulu wayo nawo kufuneka ucoceke rhoqo ngesepha kunye nesisombululo samanzi ukugcina ukugqitywa kwawo kungadanga, ngelixa kugcinwa ukusebenza kweepropathi zayo zokulwa neentsholongwane.
Ukugcinwa kwexesha kusetyenziswa i-wax kunye nokutywina kuyafuneka ukugcina umtsalane kunye nokubonakala kwawo kubengezela. Ukupeyinta, ukwenza i-lacquering, i-varnishing kunye ne-camera nayo iyimfuneko.
Isinki zobhedu ezikumgangatho ophantsi zikwenza kube lula ukufota okanye i-warp kwaye zinokufuna ukulungiswa okanye ukutshintshwa endaweni yexesha elifutshane, ziguqulela kwiindleko ezongeziweyo. Ngokubanzi, iisinki zobhedu zekhitshi nazo zibiza kakhulu xa kuthelekiswa nezinto zemveli ezifana nentsimbi engenasici, i-porcelain kunye ne ceramic.
Iindleko zesinki zobhedu ekhitshini : Ixabiso lesinki yekhitshi lokuntywila linokuhamba naphi na phakathi kwama- $ 200 ukuya ngaphezulu kwe- $ 4,000.
Oku kwahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lokumiswa kwesinki, ubungakanani, igeji yobhedu, inani lezitya kunye nesitayile sazo okanye iinkcukacha zobugcisa ezongeziweyo.
Umzekelo, iincopho zekhitshi eziphezulu zekhitshi zinamaxabiso aphakathi kwe- $ 150 ukuya kwi-2500 yeedola, kodwa isiphelo esiphezulu sokwenza izinto ezahlukeneyo zinokufikelela kwi-4500 yeedola.
Ubhedu phantsi kweentaba zekhitshi lentaba, kwelinye icala, iindleko eziphantsi njenge- $ 125, ngelixa iintlobo eziqhelekileyo zinokufikelela kwi-2,500 yeedola kwaye izinto ezenziwe ngokwesiko zinokufikelela kwi-3,500 yeedola.
Okokugqibela, ifaskoti yobhedu kunye neefinki zasekhitshini zezindlu zezona ntlobo zibiza kakhulu ngamaxabiso aqala naphi na ukusuka kwi-500 ukuya kwi-2800 yeedola kumgangatho oqhelekileyo wokuntywila, ngelixa isiko elenziwe ngokwahluka linokufikelela kwi-3500 yeedola kwisiqwenga ngasinye.
Phosa isinki engenamlinganiso yentsimbi
Esinye sezona zinto zindala ezisetyenziselwa izitya zekhitshi yintsimbi, kwaye kude kube namhla, ihlala iyenye yezona zinto zidumileyo kubanini bamakhaya.
Isinki zentsimbi ezilahliweyo zenziwe, ngokoqobo, ngokufaka isinyithi okanye ngokuyigquma nge-enamel. Intsimbi iyodwa okanye ikwimeko yayo engenanto, ithanda kakhulu ukonakala kunye nokugqwala, kodwa ukuyigquma nge-porcelain enamel yokugqiba kuyinika indawo enzima kakhulu enokumelana nayo nayiphi na indlela yokukrwela okanye amabala.
Ukuba ubunokuhluba i-enamel kwisinki yentsimbi esinki, isiphumo sombhalo ombi ophantse ufane ne-iron skillet. Nangona kunjalo, iisinki zekhitshi ezenziwe ngentsimbi ezingenamthungo zinokugqitywa okuqaqambileyo okumenyezelayo okugudileyo ekuchukumeni nasekutsaleni umdla kubanini bamakhaya abaninzi.
Ukulunga kwesinki yentsimbi : Intsimbi yentsimbi yenye yezona zinto zihlala ixesha elide kwimarike, ngakumbi xa isongwe ngombala oqinileyo we-porcelain enamel. Esi sithambiso sisetyenziselwa iitshini zekhitshi zentsimbi ayisiyiyo kuphela ukugqitywa kwepeyinti eqhelekileyo kodwa inyibilikile iglasi edityaniswe nentsimbi engenanto, yiyo loo nto inzima kakhulu, yomelele kwaye ihlala ixesha elide.
Olu hlobo lwesinki yekhitshi lukulungele ukunxiba kunye nokukrazuka kokusetyenziswa kwemihla ngemihla kwaye lunokumelana phantse naluphi na uhlobo lwento, kubandakanya izinto ezineasidi. Ukongeza kokuqina kwayo, izitya zekhitshi zentsimbi kulula ukuzicoca kwaye zihlala ixesha elide.
Inomphezulu ogudileyo kunye nokugqitywa kweglasi engabonisi nayiphi na indawo yamanzi ngokulula kwaye ingangcolisi ngokukhawuleza. Ipeyinti ye-porcelain enamel yokuyila izitya zekhitshi zentsimbi nayo inokumelana nokukhanya, ukujika kombala kunye nokubuna.
Isinki zokujula zentsimbi zikwanaso nesibheno esomeleleyo, esiqhelekileyo, okanye esidala, esenza zilungele useto oluninzi loyilo lwekhitshi. Iisinki zentsimbi zala maxesha ziveliswa kuluhlu olubanzi lweendlela kunye nemibala umntu anokukhetha kuyo, nangona kunjalo, kulindeleke ukuba ahlawule kongezelelekileyo okwahlukileyo ngaphandle kokugqitywa koqweqwe lwawo olumhlophe.
Umthengi wesinyithi ekhitshini esinki : Eyona nto iphambili ekusebenziseni isinki yentsimbi ekhitshini bubunzima bayo obunzima, ukuyenza ibe lukhetho olungalunganga kufakelo lwe-DIY.
Isinki yesinyithi esilinganiselweyo ngokomlinganiso ubukhulu bayo inobunzima obungama-100 eepawundi okanye nangaphezulu, ephindwe kabini okanye kathathu ngokungaphezulu kunesinki esemgangathweni engenasici. Ngenxa yolu bunzima bunzima, ufakelo lunzima ngakumbi ngakumbi ukuba isinki iphantsi kwentaba kuba izakufuna inkxaso eyongezelelweyo ukuyibamba endaweni.
Nangona ihlala ihlala ixesha elide, ukutyabeka koqweqwe lwenkonkxa yesinki yentsimbi inokuqhubeka nokuntywila, kwaye nje ukuba isiseko sesinyithi sivelisiwe, isinki inokuqalisa ngokukhawuleza ukurusa kwaye idle ngokuhamba kwexesha.
Nangona kunjalo, kukho amandla esinki e-porcelain esinki anamandla afumanekayo kwimarike onokukhetha kuyo ukuqinisekisa imveliso ehlala ihleli.
Iindleko zesinki yentsimbi : Xa kuthelekiswa neesinki ezingenasici ezingenanto, izitya zekhitshi zentsimbi zihlala zibiza kakhulu, ngamaxabiso aqala kwi- $ 300 ukuya kuthi ga kwi-900 yeedola.
I-enamel emhlophe ebunjiweyo yesinki yesinki ibiza ixabiso eliphantsi kuneenguqulelo zale mihla. Umzekelo, i-Kohler emhlophe emhlophe iphosa isinki ixabisa i-600 yeedola kodwa umlingani wayo omnyama uthengisa nge-850 yeedola. Ngelixa uguqulelo olunombala we-cashmere ngamaxabiso nge- $ 900 ngesiqwenga ngasinye.
Granite echibini edityanisiweyo isahluleli ephantsi
Isinki zekhitshi zeGranite zaziwa kakhulu njengezitshizi zekhitshi. Olu hlobo lwesinki lwenziwa ngokutyumza ilitye lenyengane lendalo kwaye ludityaniswe ne-resin binder ukuqinisa amandla alo.
Lo mxube uyahluka ngokuxhomekeke kumvelisi nakwimveliso, kodwa ngesiqhelo, uninzi lwazo lulandela ilitye elingama-80% ukuya kuma-20% kumlinganiselo wentlaka.
Ukudityaniswa kwezi zinto kuvelisa isinki eneempawu ezifanayo zobuhle zelitye lenyengane lokwenene kodwa thabatha imiba enxulumene nolu hlobo lwezinto. Ngokubanzi, amasinki egranite ekhitshi ayaziwa ngokuzinza kwawo okumangalisayo kunye nokugcinwa ngokulula
Ngamanye amaxesha, inyengane ifakwa endaweni ye quartz engumgubo ukwenza enye into esinki ehlala ixesha elide kwaye le mveliso yaziwa ngcono njengezinki zekitshi zokudibanisa.
Kukho iindidi ezimbini zeesinki zegranite ekhitshini ezikhoyo kwimarike. Njengoko kukhankanyiwe, eyona idume kakhulu yinyani edityanisiweyo yokuntywila ekuxoxwe ngayo ngaphambili.
Olunye uhlobo kukuntywila okuqinileyo kwegranite okwenziwe ngamatye endalo kuphela. Isinki yegranite yendalo eqinileyo inokwenziwa ibhloko enye yenyengane okanye iziqwenga zeerabhile zegranite ezidityanisiweyo.
Eyokuqala ibiza kakhulu kuba isebenzisa izinto ezingasetyenziswanga ngakumbi kwaye ithatha ixesha elide ukuvelisa. Ngelixa le yokugqibela ingabizi kakhulu kuba yenziwe kuphela ngokusikwa kwegranite edityanisiweyo, okona kunciphisa iindleko zemveliso kunye nexesha.
Kuba izitya zekhitshi eziqinileyo zenziwe ngezinto zelitye zendalo, azomelelanga okanye zomelele njengabalingani bazo abadibeneyo. Olu hlobo lwesinki yekhitshi lunokonakala ngokulula xa into enzima iwela kumphezulu wayo, ibonisa amathuba okuqhekeka okanye owaphula amalungu.
Ukusetyenziswa kwezitshini zekhitshi, kungcono ukuhamba kunye neesinki zegranite edityanisiweyo kunokuba kungafani igranite eqinileyo.
Ukulunga kweesinki zegranite zekhitshi edityanisiweyo : Isinki zegranite ezidityanisiweyo ziyaziwa ngokuzinza kwazo. Olu hlobo lwekhitshi lokuntywila lunzima kakhulu, kwaye luyabachasa ukukrwela kunye namabala.
Ngapha koko, uninzi lwabavelisi lubanga ukuba lolona luhlala ixesha elide kunye nolona luhlala ixesha elide olukhoyo kwimarike. Isinki zegranite ezidityanisiweyo nazo ziyamelana ne-chip abazenzi lula okanye baqhekeke kwimpembelelo yezinto ezinzima.
Ngaphandle kokuqina kwayo okumangalisayo, iisinki zegranite ezidityanisiweyo ziyaziwa ngenkangeleko yazo emangazayo. Olu hlobo lwesinki lunokusebenza kakuhle njengendawo ekugxilwe kuyo kwindawo esekhitshini, ngakumbi xa idityaniswe nombala wecomputer.
Ngokungafaniyo nezinye izinto zokuntywila ekhitshini, iisinki zegranite ezidityanisiweyo zinobuhle bendalo kunye nokufudumala okwahlukileyo okuninzi okusinki kwesinyithi.
Umthengi weesinki zokudibanisa igranite ekhitshini : Mhlawumbi elona cala liphambili lokuntywila kumgxobhozo wegranite yekhitshi bubunzima bayo obunzima. Kwimeko yayo yendalo, inyengane sele inzima.
Xa isetyenziswa njengezinto zokuntywila ekhitshini, i-granite edityanisiweyo inzima kakhulu kunezinye izinto zokuntywila kwaye ifuna inkxaso eyongezelelweyo.
Itafile eqinisiweyo kunye nezixhobo ezongeziweyo ziyafuneka ngexesha lofakelo, yiyo loo nto kucetyiswa ngakumbi ukuba kwenziwe yingcali kunokuba ibe yiprojekthi ye-DIY. Ngenxa yoko, oku kukhokelela kwinkcitho eyongezelelweyo ngokweendleko zabasebenzi zeprojekthi iyonke.
Nangona umbala weesinki zegranite ezidityanisiweyo zifana ngakumbi kwaye ziyaqhubeka nangaphakathi kwezinto kwaye nokuba zihlelwe ukuba zinganyangeki, amanye amanqaku asengabonakalisa kwiindawo ezimnyama.
Ikhitshi legranite eqinileyo yendalo, kwelinye icala, libonisa ukusilela okungafaniyo, njengoko kunjalo ngokwendalo. Kufuneka zitywinwe rhoqo ukuze zikhusele izinto kulo naluphi na uhlobo lomonakalo.
Oku kuguqulela kwimisebenzi eyongezelelweyo kunye neenkcitho ezongezelelweyo ngaphezulu kweendleko zesinki ngokwayo. Ngaphandle kwetywina elikhuselayo, isinki yendalo yekhitshi eqinileyo yokuntywila isenokwenzeka ukuba yehle kancinci emva kweminyaka yokusetyenziswa.
Ngokumalunga nokugcinwa, izitya zekhitshi zegranite eziqinileyo zifuna ulondolozo ngakumbi xa kuthelekiswa nezinye izinto. Ngokwesiqhelo, irabrosive ethambileyo iyafuneka ukukhusela umphezulu wesinki ukuba ungakhuhle.
Nje ukuba isinki yendalo yekhitshi eqinileyo yenziwe ibala, kufuneka isicoci esikhethekileyo segranite ukuze siyisuse, ngelixa ikrwitshiwe, kufuneka kuqeshwe ingcali ukuze ihlaziye umphezulu wayo.
Ngaphandle kwalonto, unokufuna isepha yamatye, ehlala ifumaneka kwiivenkile ezininzi zehardware, ukunika ikhitshi lakho legranite likhanye kakuhle.
Iindleko zekhitshi legranite yekhitshi edibeneyo : Xa kuthelekiswa nezinye iintlobo zokuntywila ekhitshini, isinki segranite yekhitshi ibiza kakhulu ngexabiso eliphakathi kwe- $ 300 kunye ne-600 yeedola.
Nangona kubiza ngaphezulu, iisinki zegranite ezidityanisiweyo zibonakalisa ukuba lutyalo-mali ngobulumko ngenxa yobomi babo obude kunye nokusebenza.
Indlu yefama yokucoca umlilo
I-Fireclay ixhaphake kakhulu kwisitayile sendlu yasefama okanye ifaskoti ekhitshini. Izitshisi zekhitshi lomlilo zenziwa ngokubumba udongwe lwe-ceramic kwimilo yesinki emva koko ivumele ukuba yome kwaye ifudumeze kubushushu obuphezulu kakhulu be-1600 degrees, kangangesithuba seeyure ezingama-40.
Nje ukuba udongwe lomile, emva koko lutyatyekwe nge-glaze ye-porcelain glaze kwaye ibekwe eziko lomlilo, kunye nomlilo kwakhona kangangexesha elimalunga neeyure ezingama-20 phantsi kobushushu buka-2000⁰F.
Ukubeka isinki ekufudumaleni kubushushu obuphezulu kakhulu kubangela ukuba i-glaze kunye nodongwe ludibane kunye, ukudala ukufana okunobunkunkqele kodwa okwahlukileyo. Xa idityanisiwe ngokudibeneyo, iziphumo zinzima kakhulu kwaye zinzima izinto zokuntywila ezijongeka ziphantse zafana nokuntywila kwentsimbi. Ukuza kuthi ga ngoku, i-fireclay yenza enye yeesinki ezizinzileyo ezikhoyo kwimarike.
Nangona iisinki zomlilo zihlala zinxulunyaniswa nesitayile sendlu yasefama okanye ifaskoti ekhitshini, olu hlobo lwesinki luza ngeendlela ezahlukeneyo.
Uninzi lwabantu luyatsaleleka kuyo ngenxa yesibheno sayo sakwantu kunye nembonakalo yayo engapheliyo. Iqhekeza ngalinye lesitshizi somlilo ekhitshini lenziwe ngesandla, liqinisekisa ukuba yinto enye ngokupheleleyo.
Inxalenye yomtsalane wayo ibandakanya umahluko kwinkangeleko kunye neenkcukacha ezahlukileyo ezenza ukuba kube yindawo egxile kuyo kuseto lwekhitshi.
Iinkqubo zokucima umlilo ekhitshini : Ukongeza kwisibheno sayo esibonakalayo esiphezulu, izitya zekhitshi zomlilo nazo zixatyisiwe ngenxa yokwenza kwabo ngokwezifiso kunye nokuguquguquka.
Njengoko sele kukhankanyiwe, iqhekeza ngalinye lekhitshi lomlilo elitshiswayo lenziwe ngesandla kwaye lacwangciswa ngokweenkcukacha zomntu.
Ngaphandle kwelo ziko lekhitshi lomlilo nazo azinyibiliki kwaye ziyamelana neeacidi kunye nealkali. Ayikrweli ngokulula kwaye ihlala isinki yomelele ngokuthelekiswa nezinye izinto.
Umngcipheko weendawo zokucima umlilo : Nangona i-customizable, i-fireclay sinks ingaba yinto enqabileyo kwaye kunzima ukuyifumana. Ikwafumaneka ngemibala elinganiselweyo.
Nangona iisinki zomlilo zihlala ixesha elide kakhulu, oko akuthethi ukuba ayinakutshatyalaliswa. Rhoqo i-glaze ye-enamel inokuvela kwiimpembelelo ezinzima zento eyehliweyo ngaphezulu komphezulu wesinki.
Nangona kunjalo, ukuba benza i-chip, isitya sekhitshi somlilo sithambekele ekuboniseni umbala omhlophe oqinileyo, hayi izinto ezimnyama ngaphantsi, ikakhulu ngenxa yokwakheka kwawo.
Ngaphandle kokhathalelo olufanelekileyo, isitya somlilo ekhitshini sinokubakho kumachaphaza. Kodwa ngofakelo olufanelekileyo kunye nolondolozo, olu hlobo lwesinki lunokuhlala iminyaka.
Ukufakelwa ngobulumko, izitya zekhitshi zomlilo zifuna inkxaso eyongezelelweyo ngenxa yobunzima bayo. Akucetyiswa ukuba wenziwe njenge projekthi uyenzele ngokwakho kwaye kuya kufuna iinkonzo zobungcali.
Iindleko zokucima umlilo ekhitshini : Izitshisi zomlilo ekhitshini lolunye lwezona zinto zibiza kakhulu kwimarike. Bawela kwisiphelo esiphakamileyo sombane ngamaxabiso asusela kwi- $ 400 ukuya kwi- $ 500 kwiimodeli zesitya esinye.Iinguqulelo ezinkulu zekitshi yomlilo ekhitshini zibiza ngaphezulu kwe- $ 750 nangaphezulu kwisiqwenga ngasinye.
Izitya zekhitshi yodongwe ikakhulu zenziwe ngezinto ezinje ngodongwe, iglasi, i-quartz kunye nentsimbi. Olu hlobo lwesinki phantse lufana nesinki somlilo, kodwa senziwe ngomxube wezinto kunodongwe olumsulwa.
Lukhetho oluhle ngakumbi kuhlahlo-lwabiwo mali xa kuthelekiswa nezitshisi zomlilo kodwa ineempawu zalo ezibonakalayo ezenza ukhetho olufanelekileyo emakhitshini.
Iiceramic kitchen sinks bezijikeleze iimarike amashumi eminyaka kwaye kuyo yonke le minyaka kuye kwangqina ukuba yenye yezona zinto zinokuthenjwa kwishishini lasekhitshini. Ubume bayo buvelisa umphezulu ogudileyo, ongenakungena kwaye ongafunisi manzi maninzi, nto leyo eyenza ukuba ibe yeyona nto ifanelekileyo ekukhetheni iikhitshi.
Ngokungafaniyo nesinki somlilo esidla ngokuza kuyilo olunomda, unokufumana iisinki zeceramic kuluhlu olwahlukileyo lweemilo kunye nesitayile. Iza njengendawo yokuntywila esefama kwaye ikwafumaneka kwiinguqulelo ezishiyiweyo-ngokusisiseko ibonisa ezinye iinketho kubanini bamakhaya ukuze bafumane efanelekileyo ehambelana nokhetho lwabo kunye nesimbo esixhaphakileyo samakhaya abo.
Ukulunga kweesinki zeceramic : Njengoko sele kukhankanyiwe, isibonelelo esiphambili sokuntywila kwe-ceramic kukuba ine-absorbency ephantsi yokufuma. Umphezulu wayo ongangenekiyo phantse awunamabala kwaye kulula ukuwugcina.
Ngapha koko, unokucoca iisinki zeceramic ngokusetyenziswa nje kweemveliso eziqhelekileyo zokucoca indlu kunye nesisombululo esisisiseko sesitya kunye nesisombululo samanzi usebenzisa ilaphu elimanzi. Ukucoca okunzulu kukwayimpepho kuba ungayenza usebenzisa iviniga okanye isisombululo se-bleach.
Okokugqibela, nangona iisinki zekhitshi zeceramic zingenakuphinda zenziwe ukuba ziphinde zisebenze, kodwa zinokuphoswa phantsi. Nje ukuba ususwe ekhayeni lakho, iisinki zeceramic zihlala ziphantsi zibe ngumgubo osetyenziselwa ukuvelisa iimveliso zeceramic ezintsha, ukunciphisa inkunkuma kwindalo esingqongileyo.
Umthengi weesamente zokucofa ekhitshini : Nangona yomelele, umahluko omkhulu phakathi kweesinki zekhitshi yodongwe kunye nezitshisi zomlilo kukuba eyokuqala ibuthathaka ngakumbi.
Izitya zekhitshi zeCeramic zinokuphatha ubushushu obuqhelekileyo bekhitshi kodwa kunokwenzeka ukuba zonakaliswe kumaqondo obushushu aphezulu, okuthetha ipani eshushu, isinyithi esinyithiweyo okanye imbiza eshushu kakhulu evela kwisitovu segesi inokulimaza umphezulu wesinki sakho.
Izitya zekhitshi zeCeramic nazo zihlala zithambekele, iichips kunye nokukrwela. Xa sele yonakaliswe kakubi, isitya sekhiramikhi asinakulungiswa kodwa endaweni yoko kufuneka sibuyekezwe ngokupheleleyo.
Ngokungafaniyo nesinki yegranite yekhitshi edibeneyo enemibala efanayo kuyo yonke indawo, uninzi lweesinki zeceramic ziyahluka ngokombala kwaye zigqibe kuba ikakhulu zenziwe ngezinto zokwenza izinto.
Kwaye nangona isenokuhla ngebhayisikile, iisinki zekhitshi yodongwe ayisiyiyo ngokwenene ukhetho oluhlaza kuba inkqubo yokuvelisa isebenzisa amandla amaninzi kwaye uninzi lwezinto zayo zimbiwa ngqo emhlabeni.
Iindleko zokuntywila kwamatye ekhitshi yodongwe: Njengoko sele kukhankanyiwe, iisinki zekhitshi zeceramic zizinto ezinobuhlobo kuhlahlo lwazo lwekhitshi lomlilo, ngelixa ngokubanzi, yenye yezona zinto zibiza kakhulu kwimarike, efumaneka ngokulula kwiindawo ezininzi zokuphucula amakhaya.
Kwi-avareji, isinki yekhitshi yokuntywila inokubiza naphi na ukusuka kwi-100 ukuya kwi-800 yeedola.
Ezinye iintlobo zezinto zokuntywila ekhitshini
Izinto ekuxoxwe ngazo ngasentla zezona zisetyenziswayo kwizinto eziqhelekileyo xa kusenziwa isinki yekhitshi, nangona kunjalo zininzi ezinye iindlela zangoku kwimarike.
Isinki edibeneyo yeQuartz
Iisinki zekhitshi zeQuartz zikhankanywe ngaphambili njengenxalenye yeesinki zokudibanisa iikhitshi, kuba zihlala zisetyenziswa endaweni yegranite yomhlaba.
Njengokuntywila kwegranite ekhitshini, iisinki zekhitshi ezidityanisiweyo zenziwe ngomxube weepesenti ezingama-80 zomhlaba ze-quartz kunye neepesenti ezingama-20 zokubopha intlaka. Ngokusisiseko, ikwayimveliso yobunjineli efanayo neetafile ze-quartz kwaye inokomelela okufanayo.
Isinki zekhitshi ezidityanisiweyo zenziwe zangqamana nemiphezulu yeetafile ze-quartz kwaye zibanike ukujonga okuqinileyo, okufanayo. Ngokuqhelekileyo, isetyenziswe kwizicelo zangoku kunye nezanamhlanje apho kukhethwa ubugcisa obuncinci.
Ukulunga kweesinki zekhitshi ezidityanisiweyo zekhitshi : Iisinki zekhitshi ezidityanisiweyo zeQuartz zihlala zomelele kakhulu kwaye ziyafikeleleka. Ayinyusi kwaye ayinakuthintelwa kwiiarhente zokucoca ezingamanzi ezinganyangekiyo, ibala elinganyangekiyo, intsholongwane, kwaye ayikrwitshwi, icandwe okanye iqhekeke.
Iisinki zekhitshi ezidityanisiweyo zeQuartz aziyi kuqhekeka okanye zitsibe kwifuthe elinzima kwimbiza okanye kwisitya. Ukongeza kwezi zibonelelo zininzi, izitya zekhitshi ezidityanisiweyo ze-quartz ziyamelana namaqondo obushushu aphezulu kwaye azonakalisi ngokulula kwiipani ezishushu kunye neembiza, kwaye iyakwazi ukumelana nobushushu obufikelela kuma-535 degrees Fahrenheit.
Ngokumalunga nolondolozo, i-quartz edityanisiweyo yekhitshi kulula ukuyigcina kwaye ayifuni naluphi na uhlobo lokutywina, ukuguqulela ukonga okongeziweyo ekuhambeni kwexesha. Ifuna nje ukucinywa icocwe kusetyenziswa ilaphu elifumileyo ukuthintela ukwakhiwa kwezimbiwa emanzini anzima.
Uyilo olumkileyo, i-quartz edibanisa iikhitshi ezithengiswayo zithengiswa kwiindidi zemibala eqinileyo. Kwaye ngenxa yolwakhiwo lwemveliso, le mibala ibubungqina obucimileyo kwaye iqinisekisiwe ukuba iya kuhlala ixesha lokudla ubomi.
Umxhasi we-quartz edibeneyo yekhitshi : Nangona i-quartz ekhitshini edityanisiweyo yesinki ifumaneka kuluhlu olubanzi lwemibala eqinileyo, azinazo iipateni ezifanayo ezahlukileyo ezifumaneka kwilitye lesiseko lendalo.
Iveliswa kuphela ngokugqitywa kwe-matte, ngamanye amaxesha kuthintela abanye abaninimzi abafuna indawo efanayo ecwebezelayo yesinki yentsimbi ekhitshini okanye isinki yegreyite ekhazimlisiweyo yendalo.
Xa kuthelekiswa neesinyithi zekhitshi ezidityanisiweyo, izitya zekhitshi ezidityanisiweyo azikho nzima.
Granite sinks ezidityanisiweyo zidityaniswa ngamasuntswana omhlaba oxineneyo awenziwe phantsi koxinzelelo oluphezulu, yiyo loo nto ikhokelela kumhlaba onzima ngakumbi oxhathisa ngakumbi ukukrwela, ukufiphala kunye neetshiphusi.
Nangona i-quartz ekhitshini edityanisiweyo isinki ingonakaliswa ngokulula ziimpembelelo ezinzima, ayixoleli ngakumbi izitya ezibuthathaka. Isidlo sangokuhlwa esilahliweyo asizukuwenzakalisa umphezulu, kodwa sinokwaphula isitya kwangoko.
Kwabanye, umbala ofanayo we-quartz edityanisiweyo ekhitshini isinki yiprojethi kuba ivelisa utshintsho olugudileyo, kodwa kwabanye oku kunokuba yinto engalunganga njengoko bekufumanisa kuswelekileuphawu.
Iindleko zesinki zekhitshi ezidityanisiweyo : Isinki yeQuartz edibeneyo yekhitshi iza nexabiso elifanelekileyo kakhulu, kodwa ngokubanzi ibiza kakhulu kunezinto eziqhelekileyo ezinje ngentsimbi engenasici kunye neceramic.
Kwi-avareji, i-quartz edityanisiweyo yekhitshi yokuntywila kweendleko naphina phakathi kwe- $ 200 ukuya kwi-600 yeedola, kodwa ukhetho oluphezulu lunokuhamba ukusuka kwi-800 ukuya kwi-1,200 yeedola.
Unokwazi umhlaba oqinileyo njengelitye elenziwe ngobuchule elisetyenziselwa imiphezulu yeetafile yasekhitshini, kodwa ikwasetyenziswa njengesixhobo sokuntywila ekhitshini. Kodwa endaweni yokuthengwa njengendawo yokulungiselela inkululeko, oku kuthengwa kunye nomphezulu womgangatho oqinileyo njengoko ihlala idityaniswa kuyilo lwayo.
Umphezulu oqinileyo yinto eyenziwe ngumntu eyenziwe ngokudityaniswa kweAlumina Trihydrate (ATH), i-acrylic, i-epoxy okanye i-resin ye-polyester kunye nee-pigment.
Olu hlobo lwesinki luqhele ukusetyenziswa kufakelo lwetafile olungenamthungo kunye noseto lwangoku kunye nolwanamhlanje lwekhitshi. Elona gama laziwayo lophawu lwendawo eqinileyo kwintengiso yiCorian.
Iinkqubo zekhitshi lomphezulu oqinileyo : Olona ncedo luphambili lokusebenzisa izitya zekhitshi eziqinileyo zomhlaba kukuba ezi zinto zihlala ixesha elide kakhulu.
Iyamelana nebala kwaye ayikrweli ngokulula. Ukuba iyakrwempa, la manqaku awazukuvela ngokulula kuba umbala wawo uqhubeka kuwo wonke umbandela.
Nangona inovakalelo ngakumbi kubushushu xa kuthelekiswa ne-quartz edityanisiweyo yesinki esinkini, nakuphi na ukutsha kumphezulu wayo kunokuba lula ngesanti ngaphandle.
Indawo eqinileyo ekhitshini yokuntywila nayo icocekile kwaye icocekile njengoko ingakhuthazi naluphi na uhlobo lokukhula okungafunekiyo kwebacteria kunye nokubumba okanye ukungunda.
Xa kuziwa kulondolozo, izitya eziqinileyo zomhlaba zilula ukuzicoca kunye nokuzigcina.
Isinki zekhitshi eziqinileyo zomhlaba nazo zinombala ofanayo kunye nomphezulu. Ikwenziwe ngokwezifiso kakhulu kwaye inokudityaniswa kunye nebhodi yokuhambisa amanzi.
Kwaye ekubeni yakhiwe ngokufanelekileyo kwimpahla yakho ye-countertop, unokuqinisekisa ukuba ukhangeleke kakuhle kwikhitshi lakho. Uyilo lobulumko, indawo eqinileyo iza ngemibala ebanzi kunye noyilo olunokuthi lusebenze phantse nasiphi na isitayile sasekhitshini.
Umngcipheko weesinki zomphezulu oqinileyo : Njengoko kukhankanyiwe ngaphambilana, nangona zizinzile, izitya zekhitshi zomhlaba eziqinileyo azibunyamezeli ubushushu kakuhle xa kuthelekiswa nezitshizi zekhitshi zekhitshi.
Kwaye nokuba ziyakhubazeka ekuqaleni, zisenokuqhekeka kwimpembelelo enzima.
Elinye icala elisezantsi lokuzika kwekhitshi elomeleleyo kukuba akucebisi ukuba uzenzele iiprojekthi kwaye ufuna ukufakelwa yingcali, kunye nomphezulu womhlaba oqinileyo.
Iindleko zokuntywila komphezulu oqinileyo ekhitshini: Isinki zekhitshi eziqinileyo zaphezulu zibiza kakhulu ngakumbi kuba zidityanisiwe nakwizinto zokubala.
Kuba isiko elenziwe, endaweni yokuba lilungele ukwenziwa, lindela ukuhlawula ixabiso eliphezulu kwinto leyo kunye nakwindleko zomsebenzi.
Izinto zomhlaba eziqinileyo zinokuma ukusuka kwi-25 ukuya kwi-50 yeedola ngeenyawo zenyawo. Indawo eqinileyo ekhitshini esinki inokuhla naphi na ukusuka kwisixa esikhulu se- $ 2,100 ukuya kwi-3,400 yeedola kufakelo ngalunye okanye kwisiqwenga.
Uhlobo lwefama ye-acrylic sink
Iisinki zekhitshi ze-Acrylic zinokubonakala okufanayo nezitshisi zekhitshi, kodwa zenziwe ngeplastikhi ebunjiweyo eqiniswe ngeglasi yeglasi.
Iisinki zekhitshi ze-Acrylic zibonelela ngobuninzi bezinto ezahlukeneyo kunye nokuguquguquka kubanini bamakhaya, kuba inokubunjwa ibume obahlukeneyo, ubukhulu, ubumbeko kunye nombala. Kuyaziwa ngokuba yenye yezona mfuno ziphantsi zolondolozo phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zezinto zokuntywila ekhitshini.
Ukulunga kweesinki ze-acrylic ekhitshini : Njengoko sele kukhankanyiwe, iisinki zekhitshi ze-acrylic zilula kakhulu ukuzigcina ngenxa yomphezulu wazo ogudileyo nongena porous onganyangekiyo kumabala.
Nokuba inomdla wokukhuhla, nasiphi na isiphako sinokukhutshwa ngokulula kwisanti kwaye ipolishwe. Ngokubhekisele kufakelo, iisinki zekhitshi ze-acrylic kulula ukuzifaka kwaye zibonelela ngolawulo ekuphatheni izinto kuba kulula ukuthelekisa nezinye izinto zekhitshi ezinje nge-iron cast okanye i-fireclay.
Kananjalo ayifuni naluphi na uhlobo lobunzima kwibala lokubala elikufutshane ngenxa yobunzima bayo bokukhanya.
Izitya zekhitshi ze-Acrylic ziyafumaneka kuluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha kuzo ezinokuhambelana phantse naluphi na ubeko lwekhitshi kunye nolungiselelo loyilo. Okokugqibela, iisinki zekhitshi e-acrylic ziyafikeleleka ngokuthelekiswa nezinye izinto zokuntywila ekhitshini
Umxhasi we-acrylic ekhitshini : Eyona ngxaki iphambili ngeesinki ze-acrylic ekhitshini kukuba lubuthathaka kakhulu kubushushu obuphezulu. Ipani eshushu inokuwonakalisa ngokulula umphezulu wayo kwaye ezinye zeemodeli zayo zixeliwe ukuba ziyanyibilika xa kubekwa izinto ezishushu kuyo.
Nangona ibonakala ngathi i-enamel, i-acrylic ekhitshini yokuntywila ithambile kunentsimbi kwaye inokukhangela ngokulula. Kukwanokuchaphazeleka ngakumbi kumonakalo kuyo nayiphi na imveliso esekwe kwipetroleum.
Ikhonkrithi yendlu yasekhitshini yokuntywila
Ikhonkrithi yenye yezona zinto zisisiseko zokuntywila ekhitshini. Yenziwe ngomxube wesamente, irhabaxa kunye nokuhlanganiswa okuhle kunye namanzi abunjwe kwifom yesinki. Izinki zekhitshi eziphathekayo zinokwenziwa kwisiza okanye zithengwe kwangaphambili.
Ukulunga kweesinki zekhitshi lekhonkrithi : Ikhonkrithi, njengezinto zokwakha, yaziwa kakhulu ngokwezifiso zayo eziphezulu, ke lindela ukuba ufumane ubhetyebhetye obufanayo kunye nokuguquguquka xa uyisebenzisa njengesinki yekhitshi.
Inokwenziwa ngokwesiko kulo naluphi na uyilo, ukubonelela ngamathuba angenamda kwisitya sakho sasekhitshini esakhiwe kwindawo yedreyibhodi, ii-inlay ezikhethekileyo okanye iimilo ezikhethekileyo zesinki kunye nobukhulu.
Njengoko sele kukhankanyiwe, zonke iisinki zekhonkrithi zenziwe ngokukodwa ngokweemfuno zakho zoyilo kunye nokukhetha ngokwakho kwisitayile.
Inokufakwa kwakhona kwi-countertop yekhonkrithi yoyilo olungenamthungo ngakumbi, ukuyenza ibe lukhetho olufanelekileyo kuseto lwangoku kunye nolwanamhlanje lwekhitshi.
Kwakhona, iisinki zekhitshi lekhonkrithi ayisiyonto ikhethiweyo emakhayeni, ke ukuba ufuna into ekhethekileyo, enesitayile kwaye eyahlukileyo yile yeyona ilungileyo kuwe.
Ukongeza kwii-aesthetics zayo ezizodwa, iisinki zekhonkrithi zokomelela kwaye zomelele kakhulu, ngakumbi kuba ziyinxalenye yecomputer. Inomphezulu onzima kakhulu ongafumaneki lula, okrwitshiweyo kwaye ongazukubuna. Olu hlobo lwezinto zokuntywila ekhitshini zikwangqinwa ukuba zihlala iminyaka.
Umthengi weesinki zekhitshi ekhonkrithi : Eyona nto iphambili ekusebenziseni isitya sekhonkrithi yindawo yokugcina ulondolozo oluyimfuneko. Kuya kufuneka ukuba batywinwe ngamaxesha athile ukubakhusela nakweyiphi na imibala kunye nokubanika amandla okugxotha ukufuma.
Ukuqhekeka, ukuqhekeka kunye neetshipsi nayo ingomnye umcimbi kwaye nje ukuba zivele kwikhitshi lakho lokuntywila lekhonkrithi, kufuneka zithathelwe ingqalelo ngokukhawuleza, kungenjalo zinokukhokelela kwiingxaki ezinkulu.
Izitya zekhonkrithi zekhonkrithi nazo zinzima kakhulu kwaye zinokufuna uhlobo olwaneleyo lwenkxaso yesiseko, ngokufanayo izinto zakho zangaphantsi kufuneka zomelele ngokwaneleyo ukusingatha obu bunzima bongezelelekileyo.
Iimfuno zokufakelwa ezongezelelweyo ziguqulela kwiindleko ezongezelelweyo kwizixhobo nakwizinto zokwakha. Olu hlobo lwezinto zokuntywila zinokubiza, ikakhulu kuba zenziwe ngokwesiko.
Ilitye lendalo sesinye sezona zinto zindala ezisetyenziselwa iitshini zekhitshi kwaye ukuza kuthi ga kule mini iyaqhubeka ukuba yenye yezona zinto zinokuthenjwa kwintengiso.
Isinki zamatye ekhitshi zendalo zinokwenziwa kusetyenziswa isiqwenga esinye esiqinileyo esikroliweyo, okanye iziqwenga zamatye amdaka adityanisiweyo enza isitya.
Isinki zamatye endalo ezitshini zendalo zinokwenziwa kwiintlobo ngeentlobo zamatye.Izinto zokuntywila zamatye zendalo zenziwe ngegranite, kodwa kukwakho iimodeli eziveliswa kwilitye lesepha, i-travertine, imarble okanye i-onyx, ukubala ezimbalwa.
Ekuqaleni kweminyaka yoo-1900, izindlu zamasinki ezisendlwini ephezulu zazisenziwa kwilitye lekalika, kodwa hayi ngakumbi nangakumbi abavelisi baphendukela kwigranite, kwilitye lesepha nakwimabhile. I-limestone isasetyenziselwa ukuvelisa iisinki zasekhitshini, kodwa kuyilo kuphela olwenza ukuba ilizwe elidala livakale.
Iingenelo zamatye endalo ekhitshi : Zininzi izibonelelo zokuntywila ngamatye endalo ekhitshi, kodwa uphawu lwayo olubonakalayo kukuzinza okungummangaliso kunye nomphezulu owomeleleyo.
Ilitye lendalo linzima kakhulu kwi-chip, alinakuba namazinyo kwaye alibuthathaka kubushushu obushushu.
Amatye endawo ekhitshi amatye endalo aqingqwe kwilitye elinye elinamatye anokuthi abambe naluphi na uhlobo lwentsalela yokutya, iimvuthu okanye ukungcola, yiyo loo nto lukhetho olunempilo.
Olu hlobo lwesinki yekhitshi lunomphezulu ophekiweyo ekulula kakhulu ukulicoca.
Ngaphandle kokuba itywiniwe ngokufanelekileyo, isinki yendalo yekhitshi yelitye ayinakufakwa kukufuma kwaye ayizukungcolisa. Ayenzi nasiphi na isandi, ngokungafaniyo nesinyithi kunye neesinki zesinyithi.
Isinki yelitye lendalo ikwaqinisekisiwe ukuba iya kuhlala iminyaka ingaphelelanga, kodwa amashumi eminyaka, ukuba itywiniwe ngokufanelekileyo.
Ukongeza kwizibonelelo zayo ezinomtsalane, iisinki zamatye ekhitshi zendalo zinegalelo elibonakalayo kwikhaya lakho. Ukwahluka ngokwendalo kumphezulu wokuntywila kwelitye kukwangumgangatho omnye wokuma ongenakulinganiswa nayo nayiphi na enye into.
Ikwenziwe ngokwezifiso kakhulu kwaye inokubunjwa kuyo nayiphi na indlela kunye noyilo ukuze ilingane neendlela ezahlukeneyo zekhitshi. Isinki zamatye ekhitshi zendalo zinokusetyenziselwa uyilo lwekhitshi ye-rustic.
Umthengi weesinki zendalo zekhitshi : Olona tshintsho lukhulu kumatye endalo ekhitshi ngamatye kukuba ukuba awatywinwanga ngokufanelekileyo, athanda ukonakala.
Izitshixo zekhitshi zendalo ezingatywinwanga zinokufunxa amanzi, yiyo loo nto zikhokelela kwintanda, iitshiphusi kunye namabala.Ulondolozo olongeziweyo kunye nokutywinwa kwamaxesha ngamaxesha nako kuyabuyela umva, ngakumbi ngokweendleko.
Olu hlobo lwezinto zokuntywila zinzima kakhulu kwaye zinokufuna inkxaso eyongezelelweyo okanye kwezinye iimeko, ikhabethe yesiko, kufakelo. Amashini endalo ekhitshi elitye elenziwe kwi-slabs kufuneka enziwe ngononophelo kwaye kufuneka abenendawo esezantsi ethambekisayo ukunciphisa naluphi na uhlobo lwamanzi ashiyekileyo ekuhlanganiseni.
Enye into engeloncedo kumatye endalo ekhitshi lixabiso layo. Uninzi lwezi zithengiswa ngaphezulu kwewaka leedola kwaye imarble yenye yezona ndlela zokugqibela ziphezulu.
Ukusuka kwinto ekuxoxwe ngayo apha ngasentla, uyabona ukuba iisinki zekhitshi zingena kwizinto ezahlukeneyo kwaye nganye kwezi inezinto zayo ezilungileyo nezingalunganga.
Ngaloo nto, phantse akunakwenzeka ukulinganisa zonke izinto kwaye ugqibe ngohlobo olunye olume ngaphezulu kolunye. Nangona kunjalo, size noludwe lwethu lwezinto zokuntywila zekhitshi ngokuxhomekeka kwiikhrayitheriya ezahlukeneyo.
Iindleko - Xa kuziwa kwindleko, akukho enye into enokugqitha isinki engenasici ekhitshini. Ayisiyiyo kuphela eyona ndlela ifikelelekayo kodwa ikwakhona okona kufumaneka kakhulu kwimarike.
Ungathenga iisinki zensimbi engenasici ngexabiso eliphantsi njenge- $ 100 kwiivenkile zokuphucula ikhaya.
Ukuzinza -Ukuzinza okulumkileyo, ukujula kwesinyithi kunye neesinyithi ezidityanisiweyo zingaphezulu kwezinye. Njengoko ubona, ezi sinki zenziwe ngesixhobo sokuqala esidityaniswe nenye into ukomeleza ukomelela kwayo, ukomelela kunye nobulukhuni bayo.
Isinyithi sokuphosa, umzekelo, senziwe ngesiseko sesinyithi esigqunywe nge-porcelain enamel. Ngelixa i-granite edityanisiweyo isinki yenziwe ngokudityaniswa kwee-resins kunye nomhlaba wegranite yendalo- lelona litye lomeleleyo lendalo emhlabeni.
Olu hlobo lwezinto zokuntywila zinokumelana nobushushu, ziyamelana ekuqaleni kwaye azizukushukuma ngokulula nokuba ziphantsi kwempembelelo enzima. Balindele ukuba baqhubeke iminyaka, ngakumbi ukuba bakhathalelwe ngokufanelekileyo.
Inkangeleko - Isinki yekhitshi yobhedu ziphezulu kuluhlu lwethu xa kuziwa kubuhle kunye nesibheno esibonakalayo. Unombala osisityebi, ofudumeleyo, obeka ecaleni kwezinye izinto kwaye unokuba negalelo kukhetho olukhethekileyo ekhitshini.
Kwakhona, ukuba ujonge indawo entle ekhayeni lakho, awusoze uhambe gwenxa ngobuhle obunomtsalane besinki yekhitshi.
Ulondolozo -Izinto zokudibanisa iikhitshi zeQuartz kunye neesinki zekhitshi zeceramic zezona zilula ukuzigcina phakathi kwezinto zokuntywila njengoko zombini zingafuni naluphi na uhlobo lonyango olwenziwa ngamaxesha athile, ukuthengiswa ngokutsha okanye ukucocwa okunzulu.
Unokucoca ngokulula i-quartz edityanisiweyo okanye isinki yekhitshi esinkini usebenzisa isicoci sesitya esincinci kunye nesisombululo samanzi ngendwangu emanzi okanye isiponji.
Izitya zekhitshi ziyafumaneka kuluhlu olubanzi lobungakanani, ububanzi, ubude kunye nobunzulu. Ngokuchasene nenkolelo yokuba ukukhetha ubungakanani besinki esitshini esifanelekileyo kunokudideka, kunene kulula xa uqonda ezinye zezinto ezisisiseko.
Nasi isikhokelo kubungakanani besinki yekhitshi kunye nezinye izinto ekufuneka ziqwalaselwe ekufumaneni ubungakanani besinki efanelekileyo kwikhaya lakho.
Isinki yokulinganisa esezantsi imilinganiselo ye-intshi ezingama-22 ububanzi nge-intshi ezingama-30 ubude. Imilinganiselo yangaphambili ukuya ngasemva, eyi-intshi ezingama-22, ngumlinganiso oqhelekileyo kuba uninzi lweetafile zekhitshi kunye neekhabhathi ziza kububanzi obuqhelekileyo bee-intshi ezingama-24.
Ngelixa ubude, obuyi-intshi ezingama-30, buyahluka ngokuxhomekeka kuhlobo lwesinki kunye noqwalaselo lwayo.
Ubude bezi ntlobo zilandelayo zokuntywila, umzekelo ngolu hlobo lulandelayo: isitya esinye sokuntywila sifika kubude obungama-intshi angama-33, izitya eziphindwe kabini zinokufikelela kwii-intshi ezingama-48, ngelixa iiyunithi eziphindwe kathathu zingafikelela kwii-intshi ezingama-60.
Kwelinye icala, iisinki ezimxinwa zomkhombe zincinci kakhulu kwaye ngokubanzi zinobubanzi obuncinci kakhulu kunomgangatho. Ngokwesiqhelo balinganisa i-intshi ezi-8 ukuya kwezi-14 ukusuka ngaphambili ukuya ngasemva kwaye iza kubude obungangee-intshi ezingama-50 okanye nangaphezulu.
Ubungakanani besinki obukhethileyo ekhitshini bakho buya kuthi ekugqibeleni buxhomekeke kubungakanani bekhawuntari yakho, ubungakanani beekhabhathi zakho ezisisiseko kunye nobukhulu bendawo yakho yekhitshi.
Ubunzulu besinki yekhitshi: Ubunzulu besinki esinkini buhluka kakhulu ukusuka kwi-intshi ezi-6 ukuya kwezi-12. Ubunzulu besinki, kunye nobubanzi, ubude kunye noqwalaselo, yinto ebalulekileyo ngokubaluleka kokuhamba komsebenzi wakho ekhitshini.
Xa uthatha isigqibo malunga noku, kungcono ukuba uqwalasele imisebenzi yakho yemihla ngemihla malunga nokusetyenziswa kwesinki yekhitshi. Umzekelo, iisinki ezinzulu zeesentimitha ezilishumi zenza kube lula ukuntywila iipani neembiza kuba zinokubamba amanzi kunye nezinye izinto.
Nangona kunjalo, ubunzulu besinki, kokukhona kunzima kumalungu osapho amafutshane ukuba asebenzise. Njengoko isinki engekho nzulu ishenxisa uxinzelelo lwemisipha kwaye ibonelela ngokulula ekufikeleleni kwisinki kunye nokwenza umsebenzi wokulungiselela ekhitshini.
Ubunzulu buyahluka ngokuxhomekeka kubumbeko. Kukho iiyunithi zesinki ezininzi zekhitshi eziza nezitya ezibini zobunzulu obahlukeneyo - isitya esinye esinobunzulu obusezantsi kancinci kunesinye see-intshi ezimbalwa, ngelixa esinye isitya sisinki esemgangathweni esetyenziselwa ukucoca imifuno okanye ukuhlamba izitya.
Uhlobo lofakelo luchaphazela ubunzulu besinki yakho. Ngaphantsi kwesinki yentaba, umzekelo, ihlala icwangcisiwe malunga nee-intshi ezi-2 ezantsi kunokuhla kwesinki. Ke kubalulekile ukwenza oku kuthathelwa ingqalelo, kungenjalo isinki yakho iya kuba nzima ngakumbi ukuyisebenzisa kunye nokufikelela.
Ukufumana ubungakanani besinki esinki efanelekileyo esekwe kwiikhabhathi ezisisiseko kunye nobungakanani be counter :
Xa uthatha isigqibo sobungakanani besinki efanelekileyo, kuhlala kulunge kakhulu ukugcina engqondweni. Isinki yakho kufanelekile ukuba ilingane kubungakanani bekhawuntari yakho kunye neekhabhathi ezisisiseko.
Ngokomndilili, iikhabhathi ezisisiseko sekhitshi zinobunzulu bee-intshi ezingama-24 amd zinokuphakama kwee-intshi ezingama-42 kunye nobubanzi be-25-1 / 4 ukuya kwi-26 intshi. Ukuba ikhawuntari yakho yasekhitshini ilandela obu bungakanani busemgangathweni, ngokwemvelo, i-standard standard ye-22 nge-30 yeesentimitha ubukhulu bekhitshi yeyona ukubheja kwakho.
Kumakhitshi amancinci, i-intshi ezimiselweyo ezingama-22 nge-30 intshi isenokubonakala inkulu kakhulu, ke kufanelekile ukuba ujonge iimodeli ezincinci. Nangona kunjalo, kubanini bamakhaya abanee-countertops ezinzulu ezilinganisa ii-intshi ezingama-30 okanye ngaphezulu, i-sink enkulu ingasetyenziswa.
Isikhokelo esilula sokufumana ubungakanani obuchanekileyo iya kuba kukulinganisa ubunzulu, ukuphakama nobubanzi beekhabhathi ezisisiseko, emva koko uthabathe ii-intshi ezi-2 ukuya kwezi-3 kulowo nalowo uthathwayo.
Umzekelo, ikhawuntari yasekhitshini enee-intshi ezingama-36 ubukhulu beekhabhathi zinokulingana kakuhle isinki engama-intshi ezingama-33 ubukhulu, ngelixa iikhabhathi ezingaphantsi kweesentimitha ezingama-30 kufuneka zinikezelwe ngesinki yekhitshi engekho ngaphezulu kweesentimitha ezingama-27.
Cinga ubungakanani bekhitshi lakho xa ukhetha ubungakanani besinki :
Ubungakanani bekhitshi lakho lidlala indima enkulu ekumiseleni ubungakanani obufanelekileyo besinki yekhitshi lakho. Njengoko sele kukhankanyiwe, umlinganiso, isikali kunye nokulinganisela konke kwenza uyilo olukholisa iso, kwaye kwangaxeshanye kunceda ukuba wenze okungcono kwindawo yakho ekhoyo.
Amakhitshi amancinci, afunyanwa kwiindawo zokuhlala apho indawo ikwipremiyamu efana neekhondomu, iiflethi, izitudiyo kunye neeflethi, zifuna isinki enokunceda ukwandisa indawo.
Isinki enkulu ekhitshini elincinci inokuthetha indawo encinci yokulwa kunye nendawo encinci yekhabinethi. Amakhitshi amakhulu okanye lawo anendawo enezikwere ezili-150 okanye nangaphezulu, anakho ukulungiselela iiyunithi ezinkulu, kubandakanya isitya esiphindwe kabini kunye neeyunithi zesitya eziphindwe kathathu.
Isikhokelo esifanelekileyo sokukhumbula kukuba iikhitshi ezinendawo ezinokufikelela kwizikwere ezili-150 zinokulungiselela izitya zekhitshi ezifikelela kwii-intshi ezingama-24 ububanzi.
Kwakhona, ukugcina izinto ngokulinganayo kuvelisa uyilo olunomtsalane ngakumbi, ke qiniseka ukuba isinki yakho iyahambelana nolwakhiwo lwekhitshi lakho.
Umzekelo, isinki esingaphambi kwesinki esinokubamba ngaphezulu kunokuba nakho ukoyisa ikhitshi elincinci, ngelixa isinki encinci yebar inokujongeka njengekhitshi elikhulu lekhitshi.
Cinga ngomndilili wosetyenziso lwakho ngosuku :
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, imisebenzi oyenzayo ekhitshini lakho ibaluleke kakhulu ekukhetheni ubungakanani besinki esinki kunye nobunzulu obufanelekileyo.
Ngaphambi kokuba uthathe isigqibo ngobungakanani besinki sakho sokucwina, kulungile ukuba ujonge ngakumbi iindlela zakho zokupheka, ukucoca isiqhelo kunye nokuhamba komsebenzi ekhitshini.
Izinto ezincinci zibalulekile, njengenani lezitya ozisebenzisayo ngosuku okanye ubungakanani besitya sakho esikhulu sokutya.
Ngaba usebenzisa isinki yakho ukulungiselela umsebenzi wokulungiselela, okanye uyisebenzisela ukuhlamba abantwana bakho okanye mhlawumbi, isilwanyana sasekhaya? Ngaba ubhaka rhoqo? Ke mhlawumbi ufuna isinki enkulu apho unokuhlamba khona iinkonkxa kunye neepani.
Ukuba uluhlobo olucocayo xa usiya, isitya sakho sasekhitshini akufuneki sibe sikhulu kakhulu, kodwa ukuba uloluhlobo oluvumela izitya ukuba zifumbe ekhitshini, cinga ngesinki enkulu yokuntywila izitya zakho.
Nje ukuba uthathe isigqibo ngohlobo lwesinki yekhitshi oza kuyisebenzisa, into elandelayo ekufuneka uyigqibile luhlobo lombhobho. Ngokwesiqhelo, oku kuyalelwa luhlobo lwesinki sakho kunye noqwalaselo lwayo, njengoko uninzi lweesinki lubonisa inani lemingxunya ekhoyo esinkini.
Umngxunya omnye, umzekelo, unokuthetha itompu enye ye-gooseneck, ngelixa imingxunya emithathu inokuthetha ukuba ungasebenzisa isikethi setephu esinabaxube. Ukongeza kuhlobo lwefomethi emiselweyo, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba ngaba uceba na ukubandakanya izinto ezongezelelekileyo ezinje ngezixhobo zokunyanga amanzi, izixhobo zesepha njengoko zinokudinga imingxunya eyongezelelweyo esinkini.
Iifompu zasekhitshini ziza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nemisebenzi, kwaye zininzi izinto ezinokukunceda ukhethe itompu efanelekileyo yokuhamba nesinki yakho yasekhitshini. Ezi zinto luhlobo lwesinki kunye noqwalaselo, ukuphakama kwetephu, amanqaku awodwa kunye nokugqitywa.
Uhlobo lwesinki kunye noqwalaselo . Njengoko sele kukhankanyiwe, ukucwangciswa kwesinki yakho kunokunceda ukumisela uhlobo lwetampu ehamba nayo. Ezinye iimodeli zokuntywila ziza nemingxunya enye, ngelixa ezinye ziza nemingxunya emibini ukuya kwemithathu.Isinki ezenziwe ngesiko zinokusetyenziswa ngeepompo ezifakwe eludongeni, njl. Njl. Ukuba uthatha indawo yompompo osele ukhona, inani lemingxunya esele ikho liyakunceda ubone ukuba kufuneka ugcwalise ntoni.
Ukuphakama kwetephu . Ukuphakama kombhobho yinto ebalulekileyo kwisigqibo sakho kuba kuya kukunceda ulinganise ukuba ngaba kukho indawo eyaneleyo yeekhabhinethi eziphezulu ekhitshini lakho. Ngokwesiqhelo, iipompo ezinde zisetyenziselwa ukufakela kwiziqithi okanye phambi kweefestile njengoko kukho indawo ecacileyo.
Imiboniso eyodwa . Iimpawu ezizodwa zibandakanya izitshizi kunye neesepha. Ezi zinto ziluncedo ngokukodwa ekucoceni nasekulungiseleleni umsebenzi njengoko zongeza ukusebenza kwitephu yakho. Unokujonga iifompo zasekhitshini ezithe zadiliza phantsi okanye zakhupha izitshizi, izitshizi ezisecaleni okanye iikhoyili zobungcali.
Uhlobo lokugqiba . Uhlobo lokugqiba kwitephu yakho lubalulekile kuba luyanceda ukugqibezela ukubonakala kwekhitshi lakho. Impompo yakho yasekhitshini, inokuwonyusa kakhulu umdla obonakalayo kunye nomtsalane wobugcisa ekhitshini lakho, nokuba yinto encinci kwindawo.Iipompo zihlala zivela kuluhlu olubanzi lokugqitywa olubandakanya i-chrome ephothiweyo, intsimbi engenasici, i-satin nickel, isinyithi se-antique, i-oyile yokuthambisa ioyile, ukugqiba okumnyama kunye nebrashi.
Itephu yamanzi yasekhitshini engenasici
Nazi izinto ezithandwayo iintlobo zeefompo zasekhitshini Ezifumaneka kwimarike.
Imibhobho emingxunya eyodwa - Olona hlobo luqhelekileyo lwetephu yasekhitshini kwintengiso yipeyinti enye yomngxunya. Kubhekiswa kuyo njengombhobho womngxunya omnye kuba ifuna kuphela umngxunya omnye kwitheyitile yakho yofakelo.
Ngokwesiqhelo, iimpompo zemingxunya enye ziza nesiporho esinye esikhupha amanzi kunye nesiphatho esingasentla esilawula uxinzelelo kunye nobushushu bamanzi. Imibhobho emingxunya engatshatanga iza nezitayile ezahlukeneyo kunye nokuphakama, ezinye zineentamo ezigobileyo okanye ii-goosenecks ezinde.
Izipompo zeCenterset - Iifompu zeCenterset zikwabizwa ngokuba ziiphatho ezimbini okanye iimpompo ezimbini zemingxunya. Olu hlobo lwetephu yasekhitshini inezibambo ezibini ezahlukileyo okanye abaxube - enye yeyamanzi abandayo, enye yeyamanzi, ijikeleze ispout seziko kwicala ngalinye.
Ngokungafaniyo neepompo zomngxunya ongumbobo omnye, olu hlobo lwetheyiphu ludinga imingxunya emininzi yofakelo.
Iimpompo ezixhaphakileyo - Umbhobho osasazekileyo ujongeka phantse ufana nombhobho wokuhambisa amanzi, kodwa endaweni yokuba nabaxube kunye nesiporho esidityaniswe nesitya esinye, iimpompo ezisasazekileyo zinamacandelo amathathu afakwe ngokwahlukeneyo.
Zisebenza ngendlela efanayo neziko, elinendawo ezimbini zokubamba amanzi ashushu nabandayo kunye nendawo yokuhambisa amanzi.
Iimpompo ezimbini zokuphatha ezinomngxunya omnye - Umbambo omnye ophethe umbhobho omnye uyafana kumbhobho omnye womngxunya, kodwa endaweni yokuba ube nesiphatho esinye, ineziphatho ezimbini zokulawula amanzi abandayo kunye ashushu ngokwahlukeneyo. Endaweni yokuqhotyoshelwa kwipleyiti yesiseko okanye kumngxunya owahlukileyo, izibambo ziqhotyoshelwe ngqo kwispout.
Iitephu zeBasin - Impompo yesitya inokuba sisiqwenga esinye okanye isiqwenga esiphindwe kabini seepompo ezincinci ezihlala esinkini sakho. Kwikhaya elinamanzi ashushu nabandayo, iimpompo ezimbini zokuhlambela zihlala zisetyenziswa apho ubushushu bulawulwa kwiiyunithi ezahlukileyo kunokuhanjiswa kwispout esinye.
Khupha iipompo - Ukukhupha iifompo ezineeompu zemingxunya ezinentloko enokutsalwa. Le ntloko inokutsalwa ngoncedo lwethumbu, okwenza kube lula ukuhlamba imifuno okanye izitya, ukucoca isinki okanye ukutshiza iimbiza neepani. Uninzi lukhupha iimpompo ziza neempawu zokutshiza.
Tsala iipompo - Ngokungafaniyo nokukhupha iimpompo ezinokwandiswa ngokupheleleyo kwaye zihanjiswe, itepu yokudonsa ilungelelaniswe kwindawo esezantsi. Nangona oku kuthintela ukuguquguquka kwetheyipu yakho, isebenza kakuhle ekunciphiseni ukutshiza njengoko amanzi ejolise ngokupheleleyo kwisinki.
Iimpompo ezifakwe eludongeni - Njengoko igama libonisa, udonga olubekwe eludongeni luhlobo lwetephu efakwe eludongeni endaweni yokuntywila. Iimpompo ezixhonywe eludongeni zihlala zisetyenziselwa ukucoca indawo yokubeka phezulu kunye nokubonelela ngaphezulu kwigumbi elingafunekiyo esinkini. Ngokwesiqhelo, ungasonga udonga lweepompo kwizakhelo zekhitshi zangoku kunye nezangoku.
Amacala okutshiza - Ezinye iipompo ziza nesitshizi esecaleni esihlala ecaleni kwetephu. Isongezo kwisitshizi ecaleni kwetephu siyakwandiswa kwaye sisebenze ngendlela efanayo nentloko yompompo enokufunyanwa.
Uninzi lwee-sprayers ezisecaleni ziza nezinto ezahlukeneyo ezinje nge-360 degree swivel okanye i-aerator ezinokuhlengahlengiswa kunye noxinzelelo. Olu hlobo lombhobho lukwaluncedo ekucoceni nzima ukufikelela kwiimbiza, kwiisinki nasekuhlambeni izitya nemifuno.
Ngaba unokugcwalisa - Ukuzaliswa kwembiza luhlobo lwe-ong, ityhubhu encinci eyenzelwe ukugcwalisa imbiza enzulu, iipani kunye nezitya.
Icebo lokuhambisa amanzi abandayo kunye nelokuhambisa amanzi ashushu - Ngokusisiseko, isixhobo sokuhambisa amanzi esibandayo ngumbhobho omnye womngxuma owenzelwe ukukhupha amanzi abandayo wedwa, ngelixa isixhobo sokuhambisa amanzi eshushu sisibhobho esinye somngxuma esenzelwe ukuhambisa kuphela amanzi ashushu.
Ezi mpompo ziza netekhnoloji egcina amanzi akho eshushu okanye ebanda rhoqo. Iphelisa isidingo sokufudumeza amanzi epanini okanye kwimicrowave xa kufuneka, okanye usebenzise amanzi abandayo asefrijini.
Iipompo zentengiso zasekhitshini - Iipompo zekhitshi zentengiso zihlala zisetyenziswa kwiindawo zokutyela okanye kumaziko kwaye zihambele phambili ngakumbi xa kufikwa kuyilo nakwitekhnoloji.
Nangona kunjalo, ukusetyenziswa kwabo akuphelelanga kwisicelo esinjalo kuphela njengoko sinokusetyenziswa nakwindawo yokuhlala. Ngokwesiqhelo, iipompo zentengiso zasekhitshini zinkulu ngobukhulu kuneepompo zasekhitshini zesiko.
Iimpompo ezinezihluzo zamanzi - Ezi ziipompo zasekhitshini ezenzelwe ukuhluza zonke iintlobo zokungcola ezinje ngeetyuwa kunye necadmium, iityhefu, ukugcina amanzi akho okusela ekhuselekile kusapho lonke.
Indlu yasekhitshini esinkini engenasici
Ose intshi ithumbu yesithuba somoya
Imibhobho kunye nomgibe
Ijigsaw okanye i-grinder (kwimeko apho umngxunya kwi-countertop yakho kufuneka uhlengahlengiswe)
Amanyathelo okufaka isinki yekhitshi
Kule projekthi, siza kuba sisebenzisa ishlothi okanye isink yokuphakamisela phezulu-lolona hlobo lwesinki kufakelo lwe-DIY.
Bukela ividiyo ngendlela yokufaka isinki yekhitshi:
Linganisa isinki yakho esele ikho kunye nekhawuntara . Thatha umlinganiso ochanekileyo wesinki yakho esele ikho kunye nekhawuntara kwaye uqaphele phantsi ubude, ububanzi kunye nomgama wedonga lokuntywila kwiziko lokucoca.
Yenza umzobo olula wesinki kwaye ubandakanye zonke iilebhile ezifanelekileyo kunye nemilinganiselo yereferensi yakho.
Kukwacetyiswa ukuba uthabathe umfanekiso wesimo esele sikhona sombhobho kwisitya sakho sasekhitshini, ngaloo ndlela unesikhokelo xa uphinde wahlanganisa imibhobho yamanzi kamva.
Ukuba isinki yakho esele ikho ineendawo ezahlukileyo zokuntywila okanye ubungakanani njengesinki entsha oza kuyisebenzisa ukuyitshintsha, emva koko kuya kufuneka uhlengahlengise ukuvula imiphezulu yeetafile kunye nemibhobho yamanzi ekhitshini lakho.
Vala amanzi kunye nokunikezelwa kwamandla . Qinisekisa ukucima nawaphi na amandla asebenzayo kunye nemigca yemibhobho yokuthintela nayiphi na ingozi.
Unikezelo lwamanzi abandayo kunye ashushu esinkini zihlala zibhedu ngombala kwaye zihlala zinezivalo ezivaliweyo ezifumaneka phantsi kwesinki, kwaye unokuzicima ngokulula.
Ngamanye amaxesha, unikezelo lwamanzi kufuneka lucinyiwe kutshintsho oluphambili olunokubekwa kwigumbi elingaphantsi okanye ngaphandle kwekhaya lakho.
Xa unikezelo lwamanzi lucimile, qiniseka ukuba uvule itompu ukuze uvumele nayiphi na amanzi kunye noxinzelelo kwimigca.
Kumakhaya anenkunkuma elahliweyo, qiniseka ukucima iswitshi yepaneli kwaye ucofe intambo yokulahla inkunkuma.
Cima imibhobho yesinki kunye nefomb . Usebenzisa umsonto wesitya okanye utsalo, cima umbane kwimigca yonikezelo lwamanzi usebenzisa iipleyisi zokumpompa amanzi, nqamula isinki kwimibhobho yokuhambisa amanzi.
Qiniseka ukuba ubeka ibhakethi kunye netawuli ngaphantsi ukuze ubambe kwaye usule nakuphi na ukuchitheka.
Susa ukulahlwa kwenkunkuma . Khulula umsesane oncamathisela iyunithi yokulahla inkunkuma esinkini usebenzisa i-screwdriver ende.
Nje ukuba ukulahlwa kwenkunkuma kukhululeke, kususe kwindawo yokuhambisa umbhobho.
Ungalibali ukususa indawo yokulahla inkunkuma ukusuka emazantsi edreyini ngokukhulula izikere usebenzisa i-screwdriver, njengoko oku kuyakudityaniswa kwisinki sakho esitsha.
Susa isinki endala . Ukuba isitya sakho sasekhitshini esele sikhuselwe sisibambi esingaphantsi kwetafile, sisuse ngokukhulula izikhonkwane usebenzisa iscrewdriver.
Emva koko sebenzisa imela ye-putty phantsi kwemiphetho yesinki ukuyikhulula. Nje ukuba ugqibile, susa ngononophelo isinki endaweni yaso.
Emva kokuba isinki endala isusiwe, qiniseka ukulinganisa ukuvulwa kwecomputer yakho. Sebenzisa iteyiphu yokulinganisa ukufumana ububanzi nobude obuchanekileyo kwaye uthelekise oku nobungakanani besinki sakho esitsha.
Ukuba isinki yakho entsha inkulu kuneyokuvula, unokuhlengahlengisa umngxunya wekhasethi ngokusebenzisa i-jigsaw (yee-laminate countertops) okanye i-grinder (yee-countertops zamatye).
Kwiitafile ze-slab kunye neetafile zamatye zendalo, unokufuna uncedo lobuchwephesha njengoko le nto ibucayi kwaye ifuna ukuphathwa ngononophelo.
Faka itepu entsha kwisinki entsha . Ukufakela itepu entsha kwisinki yakho entsha ngaphambi kokuyibeka kwi-countertop kulula.
Vele ubeke itompu kwimingxunya efanelekileyo esinkini kwaye uqiniseke ukuba ubandakanya isihluzo esisezantsi somngxunya kumngxunya omnye wokuntywila kwaye isihluzo sokulahla inkunkuma kwelinye. Khusela i-strainers endaweni kunye ne-putty kwaye uyibambe endaweni njengoko ubeka i-washer kwaye uqinise i-nut.
Qhoboshela ukulahlwa kwenkunkuma . Lungisa izixhobo ezinyusiweyo zofakelo lokulahlwa kwenkunkuma kwaye ulandele imiyalelo yomenzi.
Emva koko tyibilika iringi yokulahla inkunkuma ngaphezulu kwesangqa kwaye ufake intaba yomqamelo.Qiniseka ukuba umjelo ongaphakathi ulingene ngaphezu komlomo wesinki esinki.
Emva koko beka ukulahlwa kwenkunkuma phezu kwesitshixo, ukutyhalela ezantsi uze ujike kude kube kumiswe ngokupheleleyo. Qiniseka ukuba uqhagamshela intambo yolwandiso lwezixhobo zokulahla inkunkuma.
Hlanganisa umbhobho wokuhambisa amanzi . Kuqala faka into ebotshiweyo kunye nengalo enamathele kulahlwa inkunkuma. Faka umgibe kwaye ujike ukuze uqinise.
Emva koko zama ukuseta isinki entsha kumngxuma wee-countertop ukubona ukuba akukho naluphi na uhlengahlengiso ekufuneka lwenziwe. Umgibe kufuneka ulungelelanise iadaptha yomgibe eludongeni, ukuba akunjalo, ungayilungisa ngokucheba okanye ngokongeza ulwandiso.
Emva koko, fakela isikhewu somoya usebenzisa i-nut ekhwela. Sebenzisa i-hose ye-intshi yethumbu ukusuka kwindawo yokulahla inkunkuma uye kwisikhewu somoya kwaye ukhuseleke ngokubamba.
Faka itephu . Faka itepu kwaye ukhuseleke endaweni yakho usebenzisa irabha okanye iplastiki, uze uqinise izixhobo ezinyukayo. Ukuba akukho nanye kwezi ebandakanyiweyo kwimpompo yakho, faka i-putty phantsi kwethumbu lokutywina ukutywina amanzi.
Faka iityhubhu zonikezelo eziguqukayo . Faka iityhubhu zonikezelo eziguquguqukayo kwimingxunya yesinki (okanye ukungena kwetephu) ngokusebenzisa izikrufu. Qinisekisa ukuba ubude babo bufikelela kwiipavali. Ukufumana iityhubhu zonikezelo eziguqukayo ezingena ngobhedu, qiniseka ukusebenzisa isikrufu esihlengahlengisiweyo ukuyikhusela ngokuqinileyo endaweni yayo.
Phinda unxibelelanise imibhobho yamanzi yokuhlambela isitya kunye nomenzi weqhwa . Ukuxhuma phezulu njengombhobho ngaphambi kokumisela isinki endaweni kwenza umsebenzi ube lula kakhulu. Ncamathisela imigca yemibhobho yamanzi ye- isihlambi zitya kunye nomenzi womkhenkce (ukuba unayo).
Cwangcisa idrophu yakho entsha yokuntywila kwindawo . Yoma yome isinki kwakhona emngxunyeni ngokuyibeka endaweni yayo, kwakhona jonga kabini ukuba ingena ngokugqibeleleyo na ekuvulekeni.
Phakamisa isinki kwaye usebenzise itywina le-silicone ecaleni komphetho wokuvula i-countertop kwaye uqiniseke ukuba akukho zikhewu phakathi.
Yehla kwisinki kwaye usete endaweni yakho ngokufaka uxinzelelo ukuqinisekisa ukuba i-silicone sealant iyalandelwa ngokuqinileyo. Sula nasiphi na isitywina esithe kratya kwitafile yokusetyenziswa usebenzisa ilaphu elifumileyo kwaye lome imizuzu engama-30.
Faka izihluzi endaweni . Izihluzi ezindala zingasetyenziselwa isinki yakho entsha, nangona kunjalo isinki entsha iya kujongeka inomdla ngakumbi entsha.
Ngokwesiqhelo, ii-strainers zithengwa zodwa. Faka i-strainers kwimingxunya ye-drain kwaye ufake i-putty's putty emazantsi e-strainer nganye ngaphambi kokuyibeka endaweni.
Qhagamshela imibhobho yokugqibela . Ncamathisela nayiphi na imibhobho yokugqibela efumaneke ngaphantsi kwesinki, enje ngemibhobho yokuhambisa idreyini kwezihluzo ngokuqinisa i-gasket kunye namandongomane eza nezo zihluzo.
Jonga ukuvuza. Qinisekisa ukuba yonke imibhobho yamanzi ikhuselekile ngokuqinileyo endaweni yayo. Emva kofakelo, jonga ikhitshini lakho elitsha lokucoca nakuphi na ukuvuza. Kwimeko apho kuvuza khona, ziphathe ngokuqinisa izixhobo usebenzisa isikrufu okanye ngokusebenzisa i-putty okanye itywina.
Ukuba uzama iprojekthi yokulungisa kwakhona kwaye ufuna uncedo lokujonga ukubekwa kwakho kusinki ngaphambi kofakelo, jonga kwiphepha lethu Isoftware yoyilo ekhitshini . Ezi nkqubo zinokukunceda ubeke indawo yakho kwaye ugcine ixesha elibalulekileyo kunye nabasebenzi.
I-POWTECH Umsebenzi onzima we-6 FT Umatshini wokupholisa kunye… $ 9.98 umthengisi ogqibelele (2801) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-Sinkology SEK307-33-AMZ-B Uluhlu lwe-Fa… $ 499.00 umthengisi ogqibelele (112) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ruvati RVH8400 Ukwehlisa ikona ... $ 499.00 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-241 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Umgangatho waseMelika 9062008.020 Ukubala… $ 748.15 umthengisi ogqibelele (42) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
iingoma zokudlala emtshatweni
iinwele zomtshato kunye neendleko zokuhombisa
izihlangu ezimdaka ngombala ezinesuti emnyama
zeziphi izihlangu zombala ezinesuti engwevu
iindonga ezimdaka ngebala